စွဲများအတွက်မှတ်ဉာဏ်၏ဆယ်လူလာအခြေခံ (2013) - သင့် ဦး နှောက် On Porn
ဆွေးနွေးမှုများကို Clin neuroscience ။ 2013 Dec;15(4):431-43.
အဲရစ်ဂျေ Nestler, MD, Ph.D*
မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ compulsive ရှာခြင်းနှင့်ဆည်းပူးနေကားမောင်းတဲ့အားနည်းချက်ဦးနှောက်အတွက်အပြောင်းအလဲများကိုလည်းဆောင်ကြဉ်းရန်အလွဲသုံးစားမှုတစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးဖို့ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့မှုများ၏စွမ်းရည်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံး: မြောက်မြားစွာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်များ၏အရေးပါမှုကိုနေသော်လည်း၎င်း၏အမာခံမှာမူးယစ်ဆေးစွဲနေတဲ့ဇီဝဖြစ်စဉ်ကိုကပါဝင်ပတ်သက် မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကျော်, ထိုစွဲလမ်းတစ်ပြည်နယ်သတ်မှတ်။ ဤတွင်ကျနော်တို့စွဲ-ဆက်စပ်အပြုအမူမူမမှန်ပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဦးနှောက်ဒေသများတွင်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းမော်လီကျူးများနှင့်ဆယ်လူလာအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်အမျိုးအစားများကိုပြန်လည်သုံးသပ်။ ဤရွေ့ကားဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုယန္တရား, အာရုံခံခြင်းနှင့် synapses ၏ neurophysiological လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင် plasticity နှင့်ပြောင်းလဲ neurotrophic အချက်အချက်ပြခြင်းဖြင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အတွက်ကမကထပြုခဲ့အာရုံခံခြင်းနှင့် Synaptic shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်ထဲမှာဆက်နွယ် plasticity မှတဆင့်တစိတ်တပိုင်းအောင်မြင်ဗီဇစကားရပ်မြားတှငျပွောငျးလဲပါဝင်သည်။ မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်ပြုပြင်မွမ်းမံဤအမျိုးအစားတစ်ခုချင်းစီ၏ပုံစံအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါတယ် "ဆယ်လူလာသို့မဟုတ်မော်လီကျူးမှတ်ဉာဏ်။ " ထို့အပွငျက plasticity အများစုစွဲ-related ပုံစံများသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူကွုံရသောအခါဖြစ်ကောင်းအာရုံခံမှမရရှိနိုင်သပ္ပါယ်ယန္တရားများ၏ကနျ့ repertoire ထင်ဟပ် "အမူအကျင့်မှတ်ဉာဏ်" ၏ပိုပြီးဂန္ပုံစံများနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြကြောင်း plasticity အမျိုးအစားများရန်အလွန်ဆင်တူကြောင်းသပိတ်မှောက်လျက်ရှိသည် စိန်ခေါ်မှုများ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့စွဲ-related မော်လီကျူးများနှင့်ဆယ်လူလာအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်ပုံမှန်မဟုတ်သောအမှတ်တရများစွဲ Syndrome ၏အရေးကြီးသောယာဉ်မောင်းသောအမြင်နှင့်ကိုက်ညီမှတ်ဉာဏ်ကိုပိုမိုဂန္ပုံစံများ, ဖျန်ဖြေတစ်ခုကိုအတူတူပင်ဦးနှောက်ဒေသများတွင်အများစုပါဝငျသညျ။ မူးယစ်ဆေးစွဲ၏မော်လီကျူးများနှင့်ဆယ်လူလာအခြေခံ explicate ရည်ရွယ်ထားသောဤလေ့လာမှုများ၏ရည်မှန်းချက်နောက်ဆုံးမှာဇီဝအခြေစိုက်အဖြေရှာတဲ့စမ်းသပ်မှုအဖြစ်စွဲရောဂါပိုမိုထိရောက်သောကုသမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
keywords: မျိုးဗီဇကူးယူ, ပီဂနြ, CREB, ΔFosB, Synaptic plasticity, မြေတပြင်လုံးဆဲလ် plasticity, နျူကလိယ accumbens, ventral tegmental ဧရိယာ, dendritic ကျောရိုး
ဆိုးရွားလှသောဥပဒေအကျိုးဆက်များသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးသော်လည်း compulsive ရှာခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆည်းပူးနေအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည့်မူးယစ်ဆေးစွဲ, အခြို့သောဦးနှောက်ဒေသများတွင်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းကြာရှည်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများကြောင့်ဖြစ်ပွားသည်။1 အခြားသူတွေနှင့်အနောက်တိုင်းတစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးပြီးနှင့်တစ်ဦးစွဲရောဂါထွက်ပြေးလာသူနိုင်စွမ်းရှိနေစဉ်သာလျှင်အချို့သောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း, သို့သော်, ထပ်ခါတလဲလဲမူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှု၏မျက်နှာ၌စွဲမှအရှုံးမပေး။ မျိုးရိုးဗီဇအချက်များစွဲအားနည်းချက်၌ဤလူတစ်ဦးချင်းစီအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲအကြမ်းဖျင်း 50% များအတွက်အကောင့်များနှင့် heritability ၏ဤဒီဂရီစိတ်ကြွဆေး, opiates, အရက်, နီကိုတင်းနှင့် cannabinoids အပါအဝင်စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးအားလုံးအဓိကအတန်းများအတွက်စစ်မှန်တဲ့ရရှိထားသူ.2 ဒါဟာသေးမှုကြောင့်စွဲအားနည်းချက် (သို့မဟုတ်, အခြားတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ခုခံ) အပ်နှင်းဖို့တစ်ခုတည်းတစ်ဦးချင်းစီအတွက် summating မျိုးရိုးဗီဇမူကွဲ၏ဖြစ်ကောင်းရာပေါင်းများစွာ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုဖွယ်ရှိဒီမျိုးဗီဇအန္တရာယ်, ပါဝင်သောမျိုးဗီဇအများစုသိရှိနိုင်ဖို့ဖြစ်နိုင်သမျှမရှိခဲ့ပါ။
အခြား ၅၀% သောစွဲစွဲလမ်းမှုသည်တစ်သက်တာလုံးတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူတစ် ဦး ချင်း၏မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းမှုနှင့်အပြန်အလှန်အားဖြင့်သူသို့မဟုတ်သူမအားစွဲလမ်းမှုအားပိုမိုအားနည်းစေနိုင်သည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုများအပါအ ၀ င်စွဲလမ်းမှုအတွက်ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များအများအပြားပါ ၀ င်သည်။ အချို့သော“ ဂိတ်ဝေး” မူးယစ်ဆေးဝါးများ၊ အထူးသဖြင့်နီကိုတင်းသည်အခြားမူးယစ်ဆေးစွဲခြင်း၏အားနည်းချက်ကိုတိုးပွားစေသည်။3 ထို့အပြင်လူဦးရေကိုဖြတ်ပြီးစွဲများအတွက်မျိုးရိုးဗီဇအန္တရာယ်များတဲ့အကွာအဝေးရှိနေသော်လည်းအချိန်ကြာရှည်စွာများအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါး၏လုံလုံလောက်လောက်မြင့်မားသောဆေးများထိတွေ့ထားတဲ့စှဲလမျးသူသို့အတော်လေးနိမ့်မျိုးဗီဇတင်သူတစ်စုံတစ်ဦးကိုပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်, ထိုတိုးမြှင့်သက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်.4
ဂရိတ်တိုးတက်မှုတစ်ခုစွဲရောဂါဖြန်ဖြေအတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်ကြောင်းဦးနှောက်၏ discrete ဒေသများအဖြစ်မူးယစ်ဆေးဝါးများ key ကိုရှုထောင့်အခြေခံဤဒေသများတွင်သွေးဆောင်သောမော်လီကျူးများနှင့်ဆယ်လူလာအဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲမှုအမျိုးအစားများနှစ်ဦးစလုံးဖော်ထုတ်အတွက်အတိတ်ကာလဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော်ကိုဖန်ဆင်းထားသည် စွဲလမ်း၏။1,5 အများဆုံးအာရုံစိုက်မှုလက်ခံရရှိကြောင်းယင်းဆားကစ်နျူကလီးယပ် accumbens (NAc, ventral striatum ရဲ့အစိတ်အပိုင်း) အတွက် midbrain innervating အလတ်စား spiny အာရုံခံ၏ ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) တွင် dopamine အာရုံခံကပါဝငျသော mesolimbic dopamine စနစ်, အဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။ ဤရွေ့ကား VTA အာရုံခံလည်း hippocampus, amygdala နှင့် prefrontal cortex (PFC) အပါအဝင်များစွာသောအခြား forebrain ဒေသများ, innervate ။
ပထမဦးစွာအားလုံးမူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်အမျိုးအစားများအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါတယ် "မော်လီကျူးသို့မဟုတ်ဆယ်လူလာမှတ်ဥာဏ်:" ဒီလိုအပြောင်းအလဲတွေလျှက်အာရုံကြောဆဲလ်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှု၏ရလဒ်အဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသည်နှင့်ဤအရပ်မှထိုမူးယစ်ဆေးမှကွဲပြားခြားနားတုံ့ပြန်, အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများဖို့, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးရလဒ်ကဲ့သို့အခြားလှုံ့ဆော်မှုများဟာ host မှ.
ဒုတိယအချက်ကြောင့်စွဲနေတဲ့ပြည်နယ်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြကြောင်းအပြောင်းအလဲများအမျိုးအစားများ၏, ဖြစ်ကောင်းအများဆုံး, များစွာသောကြောင့်စိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ပါသည် (ဥပမာပြောင်းလဲဗီဇကူးယူ, ပီဂနြ, Synaptic နှင့်မြေတပြင်လုံးဆဲလ် plasticity နှင့်အာရုံခံ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်နှင့် neurotrophic ယန္တရားများ) လည်းအခြားသူများကိုအကြား, ထိုကဲ့သို့သော Spatial မှတ်ဉာဏ်, ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်နှင့်အော်ပရေတာအေးစက်အဖြစ် "အမူအကျင့်မှတ်ဉာဏ်" ၏အစဉ်အလာပုံစံပတ်သက်သည်ဟုယူဆရနေကြသည်။
အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးကြောင့်ထိခိုက်ဦးနှောက်ဒေသများအကြား, တတိယ hippocampus, amygdala နှင့် PFC အပါအဝင်အမူအကျင့်မှတ်ဉာဏ်များအတွက် key ကိုအာရုံကြောအလွှာဖြစ်ကြ၏သောသူတို့ဖြစ်ကြသည်။ ဒါကဆေးခန်းကိုတှေ့မွငျစွဲ၏အရေးအပါဆုံး features တချို့ကို (ဥပမာမူးယစ်ဆေးဝါးတဏှာနှင့် relapse) စွဲရောဂါဗေဒအဖြစ်အစွမ်းထက် drivers တွေကိုအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်မူးယစ်ဆေးအတွေ့အကြုံ၏ရေရှည်မှတ်ဥာဏ်နှင့်အတူရိုးရာမှတ်ဉာဏ်ဆားကစ်အတွက်မူမမှန်, ရောင်ပြန်ဟပ်သောတိုးပွားလာသဘောပေါက်နှင့်တိုက်ဆိုင်။4,7,8 အပြန်အလှန်အားဖြင့် ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်ဒေသများ (ဥပမာ - VTA နှင့် NAc) သည်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာမှတ်ဥာဏ်ကိုသြဇာညောင်းသည်။
ဤဆောင်းပါးသည်အများဆုံးသတင်းအချက်အလက်များသည်လက်ရှိတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်ရာများအတွက်နျူကလိယ accumbens အပေါ်ကိုအာရုံ, စွဲလမ်း၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်အများအပြားဟာဦးနှောက်ဒေသများတွင်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းမော်လီကျူးများနှင့်ဆယ်လူလာအပြောင်းအလဲများကို၏အဓိကအမျိုးအစားများကိုခြုံငုံသုံးသပ်ပေးပါသည်။ အရေးကြီးတာက, က postmortem ဦးနှောက်၏လေ့လာမှုများအပေါ်အခြေခံလူ့စွဲတွင်ဤအပြောင်းအလဲများကိုအချို့မှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြဖို့ ပို. ပို. ဖြစ်နိုင်ခြေရှိခဲ့သည်။ အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများကွဲပြားပရိုတိန်းပစ်မှတ်အပေါ်ကွဲပြားဓာတုဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အလုပ်ရပ်ရှိသည်ဟူသောအချက်ကိုနေသော်လည်းကြောင့်အများအပြားထင်ရှားတဲ့စွဲ-related အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်အများအပြားမှဘုံဖြစ်ကြောင်းသပိတ်မှောက်သည်, အချို့ကိစ္စများတွင်အားလုံး, မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်တစ်ဦး၏ shared features တွေအထောက်အကူပြု စွဲရောဂါ.4,9 ဆနျ့ကငျြ, များစွာသောအခြားမူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်ပေးထားသောမူးယစ်ရန်တိကျသောဖြစ်ကြပြီးပေးထားသောစွဲပိုပြီးထူးခြားတဲ့သွင်ပြင်လက္ခဏာဖျန်ဖြေလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ကတခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်လျှင်တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များမှာပိုသိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်ထားတဲ့အလွဲသုံးစားမှုလှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့် opiate မူးယစ်ဆေးဝါး, အပေါ်ကဒီမှာအာရုံစူးစိုက်။ ငါတို့သည်လည်းထပ်မံစွဲ syndrome ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာတိုးပွားစေခြင်းနှင့်တိုးတက်အဖြေရှာတဲ့စစ်ဆေးမှုများနှင့်ကုသသို့ကဤတိုးတက်မှုဘာသာပြန်ဆိုလိမ့်မည်ဟုအနာဂတ်သုတေသနအတွက်အရေးကြီးသောဒေသများမီးမောင်းထိုးပြ။
စွဲ abstinence နှစ်ပေါင်းများစွာရှိနေသော်လည်း relapse များအတွက်တိုးမြှင့်အန္တရာယ်မှာရှိနေဆဲနိုငျသောအသိပညာစွဲအလွန်တည်ငြိမ်ပြီးဖြစ်နိုငျသောဦးနှောက်ထဲမှာမူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများကပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ ဤအစွဲလုပ်ငန်းစဉ်၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းအဖြစ်မျိုးရိုးဗီဇစကားရပ်ပြောင်းလဲမှုများစဉ်းစားရန်အကြိမ်ကြိမ်အုပ်စုများကိုဦးဆောင်ထားပါတယ် (ပုံ 1) ။ ထို့ကြောင့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဗီဇသို့မဟုတ် DNA ကို microarrays နှငျ့ပတျသကျသောမျိုးရိုးဗီဇ-ကျယ်ပြန့်စုံစမ်းစစ်ဆေး၏, လေ့လာမှုများနှင့်ပိုပြီးမကြာသေးမီက RNA-seq (ထုတ်ဖော်ပြောဆို RNAs high-throughput အစီအစဉ်) အဘယ်သူ၏စကားရပ်ကြွက်နှင့်စွဲလမ်း၏မျောက်မော်ဒယ်များအတွက်နှင့်လူ့စွဲအတွက်ပေးထားသောဦးနှောက်ဒေသတွင်း၌ပြောင်းလဲနေသည်မြောက်မြားစွာဗီဇဖော်ထုတ်ထားပါတယ် (ဥပမာ, refs 10-17) ။ ထိုကဲ့သို့သောမျိုးဗီဇ၏ဥပမာများကဤသုံးသပ်ချက်ကို၏နောက်ဆက်တွဲအပိုင်းထဲမှာဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့်မှတ်တမ်းနှင့်ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုစည်းမျဉ်း၏ mechanisms ။ eukaryotic ဆဲလ်များတွင် DNA ကိုပြီးရင်နောက်ထပ်ခရိုမိုဆုမ်း (လက်ဝဲအစိတ်အပိုင်း) ဖွဲ့စည်းရန်စည်းရုံးနှင့်သိပ်သည်းနေသော nucleosomes, ဖွဲ့စည်းရန် histone octomers န်းကျင်အရှေ့ဥရောပ, တောင်အာဖရိကကစီစဉ်နေပါတယ်။ သာယာယီ Compact chromatin ပွလြော့ကတိကျသောမျိုးရိုးဗီဇ၏ DNA ကိုကူးယူထားသောစာသားစက်ပစ္စည်းမှလက်လှမ်းဖန်ဆင်းနိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော reuptake ယန္တရားများ, အိုင်းလိုင်းများနှင့် neurotransmitter (NT) အဖြစ် Synaptic ပစ်မှတ်မှတဆင့်အလွဲသုံးစားမှုလုပ်ရပ်၏မူးယစ်ဆေးဝါး intracellular အချက်ပြကက်စကိတ် (ညာအစိတ်အပိုင်း) ပြောင်းလဲပစ်ရန် receptors ။ ဤသည်မှာကူးယူအချက်များ (TFs) ၏နှင့် (အထူမြှားခြင်းဖြင့်ပြသ) chromatin-စည်းမျဉ်းပရိုတိန်းအပါအဝင်တခြားနျူကလီးယားပစ်မှတ်၏ activation သို့မဟုတ်တားစီးဖို့ဦးဆောင်; chromatin-စည်းမျဉ်းပရိုတိန်း၏ Synaptic စည်းမျဉ်းများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည့်အသေးစိတ်ယန္တရားများညံ့ဖျင်းနားလည်သဘောပေါက်နေကြဆဲဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကားဖြစ်စဉ်များနောက်ဆုံးတွင်ဤကဲ့သို့သော microRNAs အဖြစ် RNAs noncoding ဘို့သူများအပါအဝင်အထူးသဖြင့်မျိုးဗီဇ၏ induction သို့မဟုတ်ဖိနှိပ်မှုမှု; ထိုအမျိုးဗီဇတချို့၏ပြောင်းလဲစကားရပ်အလှည့်အတွက်နောက်ထပ်မျိုးရိုးဗီဇကူးယူထိန်းညှိပေးနိုင်သည်။ ဒါဟာ chromatin အဆင့်မှာကဤမူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများကိုအချို့အလွန်အမင်းတည်ငြိမ်ဖြစ်ကြပြီးအားဖြင့်စွဲလမ်းသတ်မှတ်သောကြာရှည်အပြုအမူတွေကိုအခြေခံကြောင်းအဆိုပြုထားသည်။ ပရိုတိန်း binding CREB, သိသိ amp-တုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင်; DNMTs, DNA ကို methyltransferases; ဦးထုပ်, histone acetyltransferases; HDACs, histone deacetylases; HDMs, histone demethylases; HMTs, histone methyltransferases; MEF2, myocyte-တိကျတဲ့ Enhancer အချက် 2; အဲန်အက်ဖ်-kB နျူကလီးယားအချက်-KB; Pol II ကို, RNA polymerase II ကို။ Robison AJ, Nestler EJ: ref 44 ကနေပြန်ထုတ်ပေး။ မှတ်တမ်းနှင့်စွဲလမ်း၏ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုယန္တရား။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2011; 12: 623-637 ။
အလားတူပင်မျိုးဗီဇ၏စည်းမျဉ်းဒေသများမှခညျြနှောငျနှင့်ဖြင့်သူတို့၏အကူးယူတိုးမြှင့်သို့မဟုတ်လျော့နည်းကျဆင်းကြောင်းကူးယူအချက်များ-ပရိုတိန်းများစွာသောအမျိုးအစားများကိုဦးနှောက်အတွက်မျိုးဗီဇစကားရပ်အပေါ်အလွဲသုံးမှုများမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြန်ဖြေပတ်သက်နေဗီဇ-ပါပြီ။ ထင်ရှားတဲ့ဥပမာအများအပြားအခြားသူတွေအကြား CREB (Camp တုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင် binding ပရိုတိန်း), ΔFosB (က Fos မိသားစုကူးယူအချက်), NFkB (နျူကလီးယားအချက် kB), MEF2 (myocyte တိုးမြှင့်အချက်တစ်ချက်-2), နှင့် glucocorticoid receptors, ပါဝင်သည်။5,10,18-22 အလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးများသည် ဦး နှောက်အတွင်းရှိကူးယူထားသည့်အချက်တစ်ချက်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသောဆယ်လူလာအချက်ပြလမ်းကြောင်းကိုနားလည်ရန်နှင့်၎င်းကူးယူမှုအားပစ်မှတ်၏မျိုးရိုးဗီဇနှင့်စွဲလမ်းမှု၏တိကျသောအပြုအမူဆိုင်ရာရှုထောင့်များနှင့်ဆက်စပ်မှုကိုပိုမိုနားလည်လာရန်ပိုမိုဖြစ်နိုင်လာခဲ့သည်။ ပုံ 1). ဒါဟာတိုးတက်မှုစွဲမော်ဒယ်များမှာအကောင်းဆုံးလေ့လာခဲ့ကူးယူအချက်များနေသော CREB နှင့်ΔFosB၏ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းဖြင့်သရုပ်ဖော်ထားသည်။
ပရိုတိန်း binding စခန်းတုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင်
အလွဲသုံးစားမှုလှုပ်ရှားမှုလှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့် opiate မူးယစ်ဆေးဝါးများ CREB အဆိုပါ NAc အတွက်အဓိကအပါအဝင်စွဲများအတွက်အရေးကြီးသောအများအပြားဟာဦးနှောက်ဒေသများအတွက်.23,24 CREB စခန်း, Ca အားဖြင့်အခြားစနစ်များအတွက် activated ခံရဖို့လူသိများသည်2+နှင့် growth factor လမ်းကြောင်း,25 ထိုသို့သေးအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့် NAc အတွက်၎င်း၏ activation mediates ဤအရာအရာကိုမသိရသည်။ NAc အတွက် CREB ၏မူးယစ်ဆေး activation တစ်ဦးဂန္အနုတ်လက္ခဏာတုံ့ပြန်ချက်ယန္တရားကိုယ်စားပြုပြသထားသည်, CREB သည်ဤဆေးဝါးများ၏တိကျသောသက်ရောက်မှုများ (သည်းခံနိုင်မှု) အပေါ်တိရိစ္ဆာန်၏ထိခိုက်လွယ်မှုများကိုလျှော့ချရန်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဖြတ်တောက်ခြင်း (မှီခိုခြင်း) ကာလအတွင်းအပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေကိုဖျန်ဖြေပေးသည်။.18,26,27 ဤရွေ့ကားသက်ရောက်မှုယူဆရအနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုတဆင့်တိုးမြှင့်မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် relapse မောင်းထုတ်ရန်မကြာသေးမီကပြသခဲ့ကြသည်။28 CREB ဤလုပ်ရပ်များအများစုဖော်ပြသောသူတို့ကို: D, NAc အလတ်စား spiny အာရုံခံနှစ်ခုလုံးကိုအဓိကမျိုးကွဲပါဝင်ပတ်သက်နေပုံပေါ်1 : D နှိုင်းယှဉ်2 dopamine receptors.24 Interestingly, စာပေ၏ကြီးမားသောခန္ဓာကိုယ် hippocampus နှင့် amygdala အတွက်သရုပ်ဆောင်သော CREB ပြသထားပါတယ်, အမူအကျင့်မှတ်ဉာဏ်အတွက်သော့ချက်မော်လီကျူးဖြစ်ပါသည်.29-31 စွဲလမ်းနှင့်အမူအကျင့်မှတ်ဉာဏ်၌ဤကျယ်ပြန့်အခန်းကဏ္ဍဖွယ်ရှိအာရုံခံတစ်အဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ရာနှင့်အတူမော်လီကျူးယန္တရားများတစ်ကနျ့နံပါတ် imbued နေကြတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုထင်ဟပ်။
ဒီအမူအကျင့် phenotype ဖျန်ဖြေကြောင်း CREB များအတွက်ပစ်မှတ်မျိုးဗီဇမျိုးနွယ်၏မျိုးရိုးဗီဇ-ကျယ်ပြန့် assay အဖြစ်ကိုပိုမိုရွေးချယ်ထားသည့်အားထုတ်မှုမှတစ်ဆင့်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။10,18,32 ဥပမာတစျခုကတော့ opioid peptide dynorphin ဖြစ်ပါသည်: CREB မှတဆင့်ကမကထပြုခဲ့ NAc အာရုံခံအတွက် dynorphin စကားရပ်၏လှုံ့ဆော်သော induction, VTA dopamine အာရုံခံအပေါ်ဋ opioid receptors ၏ dynorphin activation တိုးပွါးနှင့်ဖြင့် NAc မှ dopaminergic ဂီယာဖိနှိပ် နှင့်ချို့ယွင်းဆုလာဘ်.18 အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်းအခြား CREB ပစ်မှတ်မူးယစ်ဆေးဝါး-သွေးဆောင် Synaptic plasticity များအတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်ပြပြီ။ CREB ကိုလည်းစိတ်ကြွဆေးနှင့် opiates အားဖြင့်အခြားဦးနှောက်ဒေသများတွင် activated ဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်,23,24 လျော့နည်းဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်သူတို့ပေါ်ပေါက်ရသောမှတဆင့်ပစ်မှတ်မျိုးဗီဇ၏အမူအကျင့်အကျိုးဆက်များနှင့်ပတ်သက်။ လူသိများသည်။ အလားတူစွာ CREB ၏အခြားအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုဖျန်ဖြေရာတွင်အခန်းကဏ္ role နှင့် ပတ်သက်၍ လူသိနည်းသည်။19
အလွဲသုံးစားမှုနီးပါးမည်သည့်မူးယစ်ဆေးမှ acute ထိတွေ့ NAc နှင့်အခြားဦးနှောက်ဒေသများအားလုံးကို Fos မိသားစုကူးယူအချက်များဖြစ်ပေါ်သည်။ ဤသည်သော induction Fos ပရိုတိန်းပါဝင်မှုနှုန်းနာရီ 8 မှ 12 အတွင်းသာမန်ဆီသို့ပြန်ပြောင်းလိုက်ခြင်းနှင့်အတူလျင်မြန်စွာဒါပေမယ့်လည်းအလွန်အမင်းယာယီဖြစ်ပါတယ်။ ထူးခြားသည်ဤ Fos မိသားစုပရိုတိန်းအကြားΔFosB, အ FosB ဗီဇတစ်ခုခြင်းကိုထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါသည်, ၎င်း၏ပုံမှန်မဟုတ်သောတည်ငြိမ်မှု၏သီလအသုံးပြုပုံတဖြည်းဖြည်းထပ်ခါတလဲလဲမူးယစ်ဆေးထိတွေ့တဲ့သင်တန်းကတဆင့်စုဆောင်းထားတဲ့ ဤအခြေအနေများအောက်တွင်ဖော်ပြမြင်သာထင်သာ Fos ပရိုတိန်းဖြစ်လာသည်။22,33 ထိုမှတပါး, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီတည်ငြိမ်မှုများ, ΔFosB၏အဆင့်ဆင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုတ်ခွာပြီးနောက်ရက်သတ္တပတ်များအတွက်ဆက်လက်တည်ရှိနေခဲ့သည်။ ΔFosB၏ထိုကဲ့သို့သောနာတာရှည်သော induction အလွဲသုံးစားမှုနီးပါးအားလုံးမူးယစ်ဆေးများအတွက်သရုပ်ပြခဲ့ပြီး34 နှင့်အများစုမူးယစ်ဆေးအဘို့, DL-type အမျိုးအစား NAc အာရုံခံများအတွက်ရွေးချယ်ဖြစ်ပါတယ်။34,35 ထို့အပြင်၎င်းသည်ခဲ့ လူ့စွဲအတွက်သရုပ်ပြခဲ့သည်။35 စာပေ၏တစ်ဦးကကြီးမားသောခန္ဓာကိုယ်: D အတွက်ထိုကဲ့သို့သောΔFosBသော induction သရုပ်ပြထားပါတယ်1-အမျိုးအစား NAc အာရုံခံသည်တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်အားမူးယစ်ဆေးဝါးကိုပိုမိုထိရောက်စွာထိခိုက်စေနိုင်မှုနှင့်သဘာဝအကျိုးကျေးဇူးများကိုတိုးပွားစေပြီး၊ (34 မှ 38 refs ကိုကြည့်ပါ). စိတ်ဝင်စားစရာ NAc အတွက်ΔFosB၏မူးယစ်ဆေးသော induction, သာ. ကြီးမြတ်စွဲအားနည်းချက်နေတဲ့အချိန်ဆယ်ကျော်သက်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်ပိုပြီးသိသိသာသာဖြစ်ပါသည်,39 နှင့်နီကိုတင်းအားဖြင့်၎င်း၏ induction နီကိုတင်း၏တံခါးပေါက်ကဲ့သို့ကိုကင်းဆုလာဘ်တိုးမြှင့်ဖြန်ဖြေဖို့ပြသလျက်ရှိသည်.40
CREB သည်ΔFosBများအတွက်မြောက်မြားစွာပစ်မှတ်မျိုးဗီဇကိုယ်စားလှယ်လောင်းဗီဇနှင့်မျိုးရိုးဗီဇ-ကျယ်ပြန့်ချဉ်းကပ်မှု၏အသုံးပြုမှုအားဖြင့် NAc အတွက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။10,32 CREB သည် dynorphin ကိုဖြစ်ပေါ်စေသော်လည်း osFosB က၎င်းကိုဖိနှိပ်သည်။.38 နောက်ထပ်ΔFosBပစ်မှတ် cFos ဖြစ်ပါသည်: ΔFosBအထပ်ထပ်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုနှင့်အတူစုဆောင်းကြောင့် cFos represses နှင့်ΔFosBရွေးချယ်သည့်နာတာရှည်မူးယစ်ဆေး-ကုသပြည်နယ်အတွင်းရှိသွေးဆောင်သည်ကိုစေ့စေ့အောက်မေ့မော်လီကျူး switch ကိုကိုအထောက်အကူပြုရန်.41 အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဆှေးနှေးမညျအဖြစ်များစွာသောအခြားΔFosBပစ်မှတ်သည် NAc နှင့် NAc အလတ်စား spiny အာရုံခံ၏ dendritic Arbore အတွက်ဆက်စပ်အပြောင်းအလဲများအတွက် Synaptic plasticity သွေးဆောင်အလွဲသုံးစားမှုအချို့မူးယစ်ဆေးများ၏စွမ်းရည်ကိုပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်ပြသခဲ့ကြသည်။
orbitofrontal cortex (OFC) တွင်ယင်း၏သော induction အချို့အသေးစိတ်လေ့လာခဲ့ထားပြီးဖြစ်သော်လည်းအခြားအဦးနှောက်ဒေသများတွင်ΔFosBသော induction ၏အလုပ်လုပ်တဲ့အကျိုးဆက်များလျော့နည်းကောင်းစွာနားလည်သည်။ ဒီနေရာမှာΔFosBနာတာရှည်ထိတွေ့တဲ့သင်တန်းကာလအတွင်းကိုကင်းများ၏သိမြင်-ကမောက်ကမဖြစ်စေရန်သက်ရောက်မှုမှဖြစ်ပေါ်ကြောင်းသည်းခံစိတ် mediates, ဤလိုက်လျောညီထွေတိုးမြှင့်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်.42,43
မျိုးရိုးဗီဇ-ကျယ်ပြန့် assay သည်ဤသက်ရောက်မှုဖျန်ဖြေအများအပြားအလားအလာပစ်မှတ်မျိုးဗီဇအကြံပြုခဲ့ကြသည်။42 osFosB ၏ထူးခြားသောယာယီဂုဏ်သတ္တိများနှင့်၎င်းသည်ရိုးရာမှတ်ဉာဏ်ဆားကစ်များ (ဥပမာ - hippocampus) တွင်ဖြစ်ပေါ်သည်ကိုသိသော်လည်းအနာဂတ်သုတေသနအတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအပြုအမူဆိုင်ရာမှတ်ဉာဏ်တွင် osFosB ၏အခန်းကဏ္ofကိုစူးစမ်းလေ့လာခြင်းမရှိသေးပါ။
ပိုပြီးမကြာသေးမီနှစ်များတွင်ကူးယူ၏လေ့လာမှုများပီဂနြမှတဦးတည်းခြေလှမ်းနောက်ထပ်တွန်းအားပေးခဲ့ကြ44 (ကြည့်ရှု ပုံ 1), ယဘေုယအြား DNA ကို sequence ကိုတစ်ပြောင်းလဲမှုမရှိခြင်းအတွက်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းဗီဇစကားရပ်အတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည့်။ ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်ယန္တရားများ histones နှင့်အတူတကွ chromatin ပါဝင်သည့်နျူကလီးယားပရိုတိန်း၏များစွာသောအခြားအမျိုးအစားများနှင့်အတူ၎င်း၏ interaction ကနေတစ်ဆင့်တစ်ဆဲလ်နျူကလိယအတွင်း DNA ကို၏ထုပ်ပိုးကိုထိန်းချုပ်။ မျိုးဗီဇစကားရပ် histones အခြားပရိုတိန်းနှင့် DNA ကိုသူ့ဟာသူ၏ covalent ပြုပြင်မွမ်းမံမှတဆင့်ဒီထုပ်ပိုး၏ပြည်နယ်ကထိန်းချုပ်ထားသည်။ ရုံတချို့ဥပမာအဖြစ်, histones ၏ acetylation ဗီဇ activation မြှင့်တင်ရန်လေ့, histones ၏ methylation ဒီပြုပြင်မွမ်းမံလျှက်အဆိုပါ Lys ကျန်ကြွင်းပေါ် မူတည်. မျိုးဗီဇကို Activation သို့မဟုတ်ဖိနှိပ်မှုမြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေနှင့် DNA ကို၏ methylation ယေဘုယျအားဖြင့် (methylation အချို့မူကွဲပုံစံများဖြစ်သော်လည်းဗီဇဖိနှိပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည် ဥပမာ 5-hydroxymethylation) မျိုးဗီဇကို activation နှင့်ဆက်စပ်နိုင်ပါသည်။
ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းအခြားစနစ်များအတွက်ဥပမာ, ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာနှင့်ကင်ဆာဇီဝဗေဒကြောင့်တစ်ဦးနှစ်သက်ဖွယ်ယန္တရားဖြစ်ပါတယ်, အချို့ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုပြုပြင်မွမ်းမံအမြဲတမ်းရှိနိုင်ပါသည်။ ဒီအတွက်ကြောင့်, ပီဂနြ (45-48 refs ဥပမာ) လေ့လာသင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်မော်ဒယ်များအတွက်နှစ်ဦးစလုံးကို လိုက်. အဖြစ်စွဲလမ်းထဲမှာထားပြီး;44,49 နှစ်ဦးစလုံးစနစ်များအတွက်လေးနက်သောအပြောင်းအလဲ histone acetylation နှင့် methylation နှင့် DNA methylation အစီရင်ခံခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ့်တဦးတည်းသာဓကသကဲ့သို့, histone methyltransferase, G9a, နှစ်ဦးစလုံးမှတ်ဉာဏ်နှင့်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသည်ကို50 နှင့်စွဲလမ်း။51,52 စွဲမော်ဒယ်များခုနှစ်, G9a စကားရပ် downregulated ဖြစ်ပါတယ် အလွဲသုံးစားမှုလှုံ့ဆော်သို့မဟုတ် opiate မူးယစ်ဆေးဝါးများတုံ့ပြန် NAc နှင့် t ကိုအတွက်မိမိအဒီဆေးတွေရဲ့အကြိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုးမြှင့်ပြသခဲ့ပြီး.51,52 စိတ်ဝင်စားစရာ G9a ၏ကင်းဖိနှိပ်မှုΔFosBကကမကထပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ G9a histone H9 (H3K3me9) ၏ Lys2, မျိုးဗီဇဖိနှိပ်မှု၏အဓိကအာမခံ၏ dimethylation catalyzes ။ chip-chip ကိုသို့မဟုတ် chip-seq (chromatin immunoprecipitative ကမကထချစ်ပ်သို့မဟုတ်မြင့်မားသော throughput အစီအစဉ်အသုံးပြုပုံအသီးသီးနောက်တော်သို့လိုက်) လှုံ့ဆော်သို့မဟုတ် opiate ထိတွေ့ပြီးနောက်ပြောင်းလဲ H3K9me2 ဖော်ပြရန်ကြောင်း NAc အတွက်မျိုးဗီဇ၏မျိုးရိုးဗီဇ-ကျယ်ပြန့်ပြမြေပုံများရယူဖို့အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။32,52,53 မျိုးဗီဇစကားရပ်ပြောင်းလဲမှုများမျိုးရိုးဗီဇ-ကျယ်ပြန့်စာရင်းနှင့်အတူထိုအမျိုးဗီဇစာရင်းထပ်ခြင်းအားဖြင့်, နှင့်ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုပြုပြင်မွမ်းမံ၏များစွာသောအခြားပုံစံများကို (ဥပမာΔFosB binding, CREB binding အခြား histone ပြုပြင်မွမ်းမံ, etc) ၏မျိုးရိုးဗီဇ-ကျယ်ပြန့်ပြမြေပုံများနှင့်အတူ,32,53 ကအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ကြသည်မျိုးဗီဇတစ်ခု ပို. ပို. ပြည့်စုံတစ်စုံကိုဖေါ်ထုတ်ရန်နှင့်ပါဝင်ပတ်သက်နောက်ခံဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုယန္တရားကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ဖြစ်နိုင်သမျှဖြစ်သင့်သည်။
မှတ်ဉာဏ်နှင့်စွဲလမ်းထဲမှာပတ်သက်သည်ဟုယူဆရဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုစည်းမျဉ်း၏နောက်ထပ်ပုံစံ microRNAs ၏မျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားသေးငယ် noncoding RNAs mRNAs ၏ဖြည့်စွတ်ဒေသများမှခညျြနှောငျနှင့်အားဖြင့်မိမိတို့အဘာသာပြန်ချက်ဖိနှိပ်သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ပျက်စီးခြင်းသွေးဆောင်။ Argonaut ၏ပယ်ဖျက်ခြင်း, miRNAs ၏အပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက်အလွန်အရေးပါနေတဲ့ပရိုတိန်း, D1-type အမျိုးအစားအလတ်စား spiny အာရုံခံနှိုင်းယှဉ် D2- များအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိကွဲပြားသက်ရောက်မှုနှင့်အတူကင်းရန်အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုပွောငျးလဲ။54 အများအပြားကတိကျတဲ့ miRNAs ထိုနည်းတူမူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုအားဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ခံရဖို့နဲ့, အလှည့်၌, မူးယစ်ဆေး (ဥပမာ 55,56 refs) မှအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုးရန်ပြသခဲ့ကြသည်။ ဤ miRNAs ၏ mRNA ပစ်မှတ်ဖော်ထုတ်ပြီးသူတို့စွဲဖြစ်စဉ်ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေပုံကိုလက္ခဏာမှအနာဂတ်လေ့လာမှုများအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
အမူအကျင့်မှတ်ဉာဏ်အတွက် hippocampus နှင့် amygdala ်ပတ်သက်နေခဲ့ကြရသော glutamatergic synapses မှာ Synaptic ပြုပြင်မွမ်းမံ၏တူညီသောယေဘုယျအမျိုးအစားများ (ဒီပြဿနာတခြားဆောင်းပါးတွေကိုကြည့်ပါ), အလားတူစွဲမော်ဒယ်များအတွက်ဦးနှောက်ဆုလာဘ်ဒေသများတွင်ပေါ်ပေါက်ဖို့နဲ့ဖြန်ဖြေအတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်ပြခဲ့ကြ အဆိုပါစွဲဖြစ်စဉ်ကို.57,58 ထိုသို့သောမူးယစ်သွေးဆောင် Synaptic plasticity အများအပြားဟာဦးနှောက်ဒေသများမှာဖော်ပြထားတဲ့ခဲ့ပြီး, သို့သော်ကျနော်တို့သုတေသနအများစုယနေ့အထိအာရုံစူးစိုက်ထားပြီးဘယ်မှာ NAc အပေါ်ကဒီမှာအာရုံစူးစိုက် (ပုံ 2).
နျူကလိယ accumbens (NAc) တွင်စွဲ-related Synaptic နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ plasticity ၏စံပြ။ α-အမိုင်နို-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic အက်ဆစ် (AMPA) နှင့် N-methyl-D-aspartic အက်ဆစ် (NMDA) ၏အချိန်-မှီခိုခြင်းနှင့်ယာယီပြန်လည်ဖွဲ့စည်း NAc အလတ်စားမှာအချိုမှု receptors အတွက်ကင်းရလဒ်များကိုမှနာတာရှည်ထိတွေ့မှု spiny အာရုံခံဆဲလျ (MSN ကို) synapses အဖြစ် Synaptic plasticity ၏ကွဲပြားသောပုံစံများနှင့်အတူပတျသကျကြောင်း NAc MSNs ၏ကျောရိုးဦးခေါင်း၌ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကို။ ဥပမာအားဖြင့်, နာတာရှည်ကင်းအစောပိုင်းရုပ်သိမ်းအချိန်အချက်များမှာ NMDA receptors ၏မျက်နှာပြင်စကားရပ်, အသံတိတ် synapses ဖွဲ့စည်းရေးနှင့်ရေရှည်စိတ်ကျရောဂါ (, LTD) ဖြစ်ပေါ်သည်။ ပိုပြီးကြာရှည်ဆုတ်ခွာ (wd) ကိုစဉ်အတွင်းဤ Synaptic အပြောင်းအလဲရလဒ်မျက်နှာပြင် AMPA receptors ၏တိုးလာစကားရပ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့မှို-shaped ကျောရိုးနှင့်ရေရှည်အလားအလာ (LTP) သို့ synapses တစ်စုစည်းပြီး reverse ။ ဤရွေ့ကားသက်ရောက်မှုလျှင်မြန်စွာပါးလွှာကျောရိုးနှင့် Synaptic အစွမ်းသတ္တိ၏တစ်ဦးစိတ်ကျရောဂါသို့ကျောရိုး၏ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းဖို့ဦးဆောင်ကင်းတဲ့စိန်ခေါ်မှုထိုးထိတွေ့အပေါ်သို့ပြန်ပြန်ပြောင်း။
ကနဦးစမ်းသပ်ချက်အလွဲသုံးစားမှုလှုံ့ဆော်မူးယစ်ဆေးဝါးများဖို့ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့သည့် NAc အတွက် glutamatergic synapses မှာပြည်နယ် -like တစ်ခု, LTD (ရေရှည်စိတ်ကျရောဂါ) induces ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။59 သို့သျောလညျးကိုပိုမကြာသေးမီအလုပ်, LTD ရှည်ဆုတ်ခွာအချိန်မှတ်ပြီးနောက်ပြည်နယ် -like တစ်ခု LTP (ရေရှည်အလားအလာ) ၏ပိုပြီးသို့ဖြစ်ပေါ်နေသောနောက်ဆုံးအကင်းထိတွေ့ပြီးနောက်အစောပိုင်းဖြစ်ပေါ်အတူမြင့်မားအချိန်-မှီခိုဖြစ်တို့အားဤသို့သော plasticity သရုပ်ပြခဲ့သည်။60,61 ယနေ့အထိကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ-မူးယစ်ဆေးဆန့်ကျင်အဖြစ်အုပ်ချုပ်-အဓိကအားစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးသုံးပြီးထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့ပြီးသောဤအလုပ်, အတွက် glutamatergic synapses မှာဖြစ်ပေါ်ကြောင်း Synaptic plasticity များ၏ပုံစံများကိုခြေရာခံကြောင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးမော်ဒယ်များမှာပိုစနစ်တကျစုံစမ်းစစ်ဆေးဘို့လိုအပ်ကြောင်းသတ်မှတ်ထားပါတယ် ယင်း၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အုပ်ချုပ်ရေးဝယ်ယူရာမှအသေးစိတ်အချိန်သင်တန်းကျော်ရုပ်သိမ်းရေးနှင့်မျိုးသုဉ်း၏ကွဲပြားခြားနားသောအဆအားဖြင့်, relapse-evoking လှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန် NAc ။ ယနေ့အထိအလုပ်ကိုလည်း CaMKII မှတဆင့်ဖြစ်ကောင်းအစိတ်အပိုင်းအတွက်ကမကထပြုခဲ့သည့် synapses မှ AMPA receptors ၏လူကုန်ကူးမှုအပါအဝင်ဒီမူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင် Synaptic plasticity အထောက်အကူပြုသောမော်လီကျူးယန္တရားများ, အချို့သတ်မှတ်ထားပါတယ် (Ca2+/ calmodulin-မှီခိုပရိုတိန်း kinase II ကို) အချို့ AMPA အဲဒီ receptor subunits ၏ phosphorylation အဖြစ် AMPA အဲဒီ receptor subunits (ဥပမာ 60,62-65 ၏ပြောင်းလဲစကားရပ်, ကိန်းဂဏန်းများ2နှင့် 3). CREB နှင့်ΔFosBတစ်အခန်းကဏ္ဍ (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) သည်ဤဖြစ်ရပ်အတွက်အဖြစ် glutamatergic synapses ၏ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်ထဲမှာဆက်စပ်နေသောအပြောင်းအလဲများအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, GluAl ဒီဦးနှောက်ဒေသအတွက်, GluA2 နှင့် CaMKII ΔFosBနှစ်ခုစလုံးပစ်မှတ်များမှာဘယ်မှာ NAc အတွက် CREB များအတွက်ပစ်မှတ်တစ်ခုဖြစ်သည် .35,36,66,67 ရှေ့ဆက် Moving, က Synaptic function ကိုနှင့်စွဲလမ်း၏အမူအကျင့် features တွေအတွက်အချိန်ကုန်မှီခိုအပြောင်းအလဲများမှတိကျတဲ့အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်လင့်ထားသည်ရန်အရေးကြီးပါသည်ဖြစ်လိမ့်မည်။
နျူကလိယ accumbens (NAc) အလတ်စား spiny အာရုံခံအပေါ် dendritic ကျောရိုး၏ကင်းသော induction အခြေခံမော်လီကျူးယန္တရားများ။ A) က G9a သို့မဟုတ် JunD (AP1 -mediated ကူးယူမှု၏ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း) ၏ဗိုင်းရပ်စ် overexpression အားဖြင့်ပိတ်ဆို့နိုင်ပါတယ်, ဒါမှမဟုတ် FosB ၏ဗိုင်းရပ်စ် overexpression အားဖြင့်တုပနိုင် dendritic ကျောရိုးအရေအတွက် Coca- သွေးဆောင်တိုးပြသထားတယ်။ ခ) AMPA receptor (AMPAR) လူကုန်ကူးခြင်းနှင့် actin cytoskeleton (ဘယ်ဘက်) ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအပြင် glutamate receptors နှင့် transin ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာပရိုတိန်းများကူးယူခြင်းကိုစည်းမျဉ်းများ (ဥပမာ - osFosB မှတဆင့်ဖြန်ဖြေထားသည့်အတိုင်းလက်ျာ) သည်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ roles မှပါ ၀ င်သည်။ NAc dendritic ကျောရိုးသိပ်သည်းဆ၏ကင်းရဲ့စည်းမျဉ်းဖျန်ဖြေအတွက်။ UMK, LIM ဒိုမိန်း kinase; RAC, Ras-related C3 botulinum အဆိပ်အတောက်အလွှာ။
နယူးစမ်းသပ် tools တွေအထူးသဖြင့်ဆားကစ် Synaptic plasticity နှင့်အမူအကျင့်အဘယ်အရာကိုမူမမှန်သူတို့ဖျန်ဖြေဤပုံစံများကိုပြသရာ။ တိုးပွားလာတိနှင့်အတူသတ်မှတ်မှပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အဖြစ်နိုင်လုပ်နေပါတယ် ဥပမာအားဖြင့်, t ကိုD1- တစ်ခုချင်းစီကိုမဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်းအတွင်း D2-type အမျိုးအစားအလတ်စား spiny အာရုံခံနှိုင်းယှဉ်ပြောသကဲ့သို့သူသည်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင် Synaptic plasticity အတွက် NAc display ကိုခြားနားချက်များငျဒသေ Shell နှင့် core ကို။60,63,64,67 အလားတူပင် optogenetic စမ်းသပ်ချက် ventral subiculum နှိုင်းယှဉ် basolateral amygdala နှိုင်းယှဉ် medial PFC မှပေါ်ပေါက်သောသူတို့အား (ဥပမာ, NAc အတွက် glutamatergic synapses ၏တိကျသောလူဦးရေမှာ Synaptic plasticity (ဥပမာ, LTD) ၏အထူးသဖြင့်ပုံစံများ၏အလှူငွေသို့အဓိကထွက်ရှိဝတ္ထုထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေး hippocampus ၏) ။68-70 နောက်ဆုံးတွင်၎င်းသည် afferent အာရုံခံဆဲလ်တစ်ခုစီတွင်မူးယစ်ဆေးသွေးဆောင်မော်လီကျူးလိုက်လျောညီထွေမှုရှိစေရန် ၄ င်းတို့၏ postynaptic dendrites တွင်ပေါ်ပေါက်လာသော synapse - တိကျသောလိုက်လျောညီထွေမှုများဖြင့်အလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးများသည် ဦး နှောက်၏ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုမည်သို့မည်ပုံပြောင်းလဲစေကြောင်းကိုအပြည့်အဝနားလည်မှုကိုပြုစုရန်လိုအပ်သည်။ စွဲပြည်နယ်။ ဤသည်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုသည်ဤအတူတူ ဦး နှောက်ဒေသများအတွင်း inhibitory synapses မှာမူးယစ်ဆေးဝါး - သွေးဆောင်ပလပ်စတစ်၏သာ။ ကြီးမြတ်နျဖိုးထားလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်, ယနေ့အထိအနည်းငယ်သာအာရုံကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည့်areaရိယာ။65
သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်ဖြစ်ရပ်အတွက် Synaptic plasticity အာရုံစိုက်လာခဲ့သည်အဖြစ်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုဖြစ်ရပ်အတွက်အာရုံခံအတွက် neurophysiological အပြောင်းအလဲများနဲ့ပတ်သက်တဲ့သုတေသနလုပ်ငန်းများအများစုနေစဉ်တွင်, အဖြစ်ကောင်းစွာမြေတပြင်လုံးဆဲလ် plasticity ၏အရေးပါမှုကိုအဘို့တိုးမြှင့်သက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်။ ထို့အပြင် homeostatic plasticity အဖြစ်ရည်ညွှန်းမြေတပြင်လုံးဆဲလ် plasticity,71 က synapses-သတ်သတ်မှတ်မှတ်မရသောထုံးစံ၌တစ်ခုလုံးကိုအာရုံကြောဆဲလ်များ၏အခ်ါစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အပြောင်းအလဲများပါဝငျသညျ။ မူးယစ်ဆေးစွဲအချို့ features တွေတိုးမြှင့်ခြင်းသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးမှ sensitivity ကိုလျှော့ချပါဝင်ကြောင်းပေးထားသောကြောင့်အချို့သောအာရုံကြောဆဲလ်များမြှင့်တင်ရန်သို့မဟုတ်လျှော့ချလျှပ်စစ်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်သောဤအမူအကျင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်အထောက်အကူပြုကြောင်းသဘာဝကျပါတယ်.5
အဆိုပါ အလွဲသုံးစားမှုတစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးဖို့တပြင်လုံးကိုဆဲလ် plasticity ၏အကောင်းဆုံးထူထောင်ဥပမာ locus coeruleus (LC ၏ noradrenergic အာရုံခံ၏အခ်ါစိတ်လှုပ်ရှားတိုးမြှင့်ဖို့နာတာရှည် opiates များ၏စွမ်းရည်ဖြစ်ပါသည်).72 ဤသည်တိုးမြှင့်စိတ်လှုပ်ရှား CREB နှင့်ဖြစ်ကောင်း Na + လိုင်းများ၏ induction မှတဆင့် LC အာရုံခံ၏တိုးလာပစ်ခတ်ရန်မောင်းရသော adenylyl cyclase အချို့ isoforms, ၎င်း၏သော induction မှတဆင့်ကမကထပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။72-75 LC အာရုံခံ၏ဤ hyperexcitabilty သည်းခံစိတ်နဲ့မှီခိုနေတဲ့ဂန္ယန္တရားကိုယ်စားပြုပြီး opiate ဆုတ်ခွာ၏လက္ခဏာနှင့်ရောဂါလက္ခဏာအချို့မောင်း။ စိတ်ဝင်စားစရာ CREB လည်း CREB မှတဆင့်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှနာတာရှည်ထိတွေ့မှုအားဖြင့် hyperexcitable ပြန်ဆိုထားတဲ့ NAc အလတ်စား spiny အာရုံခံအတွက်မြေတပြင်လုံးဆဲလ် plasticity ၏အလားတူပုံစံ mediates ။76 ဒါဟာအရှင် NAc အလတ်စား spiny အာရုံခံအပေါ် CREB-mediated ဘယ်လို glutamatergic synapses ၏ Synaptic plasticity နားလည်ရန်အနာဂတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအတွက်အရေးပါပါလိမ့်မည်65,66 ဤအအာရုံခံ၏ CREB-mediated အခ်ါ hyperexcitability နှင့်အတူ summates76 စွဲလမ်း၏အမူအကျင့် features တွေထိန်းချုပ်ဖို့။
စွဲမော်ဒယ်များအတွက်မြေတပြင်လုံးဆဲလ် plasticity ၏နောက်ထပ်ဥပမာချိုးဖောက်မှုများ opiate မူးယစ်ဆေးဝါးများမှနာတာရှည်ထိတွေ့ပြီးနောက်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်း VTA dopamine အာရုံခံ၏ hyperexcitability ဖြစ်ပါသည်အီး (ပုံ 4).77,78 အောက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့, ဤအာရုံကြောဆဲလ်တွေမှာရှိတဲ့ morphological အပြောင်းအလဲများနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်သောဤလိုက်လျောညီထွေ, (လာမယ့်အပိုင်းကိုကြည့်ပါ), CREB ကကမကထပြုခဲ့ပေမယ့် neurotrophic အချက်ပြကက်စကိတ်၏စည်းမျဉ်းကနေတဆင့်အစားအောင်မြင်မပေးပါ။
ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) dopamine အာရုံခံအတွက်နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင်အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်၏အလုပ်လုပ်ကိုင်မော်ဒယ်။ နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်အတွက်နျူကလိယ accumbens မှ dopamine ဂီယာလျော့နည်းသွားနေစဉ် VTA dopamine (DA) Soma အရွယ်အစားသေး, အာရုံခံစိတ်လှုပ်ရှားတိုးပွါးလျော့နည်းစေပါသည်။ မော်ဖင်းအကိုက်ပိုက်ကွန်အကျိုးသက်ရောက်မှုဆိုလိုသည်မှာသည်းခံဆုချတဲ့နည်းသောတုံ့ပြန်မှုဆုလာဘ်လမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ VTA အတွက်အချက်ပြ IRS2-AKT ၏ Downregulation Soma အရွယ်အစားနှင့်လျှပ်စစ်စိတ်လှုပ်ရှားအပေါ်နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်၏သက်ရောက်မှု mediates; စိတ်လှုပ်ရှားနိုင်စွမ်းအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုလျော့နည်းသွားγ-aminobutyric အက်ဆစ် (GABA) တစ် ဦး ကရေစီးကြောင်းနှင့် K 'ရုပ်သံလိုင်းစကားရပ်၏ဖိနှိပ်မှုမှတဆင့်ကမကထပြုခဲ့။ VTA အတွက် mTORC2 လှုပ်ရှားမှုမော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင် downregulation သည်ဤမော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင် morphological နှင့်ဇီဝကမ္မအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်ဘို့အဖြစ်ဆုလာဘ်သည်းခံစိတ်များအတွက်အလွန်အရေးပါသည်။ mT0RC2 မတူဘဲ, နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်သောဤမော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင်အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်သြဇာလွှမ်းမိုးမ mTORCI လှုပ်ရှားမှု, တိုးပွားစေပါသည်။ BDNF, ဦးနှောက်-ဆင်းသက်လာ neurotrophic အချက်; IRS ကို, အင်ဆူလင်အဲဒီ receptor ပစ္စည်းဥစ္စာ; mTORC, mTOR ရှုပ်ထွေး; ref ထံမှ AKT, ပရိုတိန်း kinase B ကို Reproduced 77
Morphological plasticity နှင့် neurotrophic ယန္တရားများ
သက်သေအထောက်အထားတိုးမြှင့်, hippocampal ၏လေ့လာမှုများနှင့်ဦးနှောက် cortical အာရုံခံကနေတာ, Synaptic plasticity ပြောင်းလဲမှုများ synapses မှာ morphological အပြောင်းအလဲများနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောပြသခဲ့သည်။ LTP ပိုကြီးတဲ့, မှို-shaped ကျောရိုးနှင့်ဆက်စပ်နေသည်သော်လည်းဥပမာအားဖြင့်, LTD နှင့်အသံတိတ် synapses ၏မျိုးဆက်, ပါးလွှာသို့မဟုတ်ပေးသော Stubby dendritic ကျောရိုး၏ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။79,80 ထို့ကြောင့်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည်မှာမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနယ်ပယ်သည်မူးယစ်ဆေးဝါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောကျောရိုးရှိသတ္တဝါများပြောင်းလဲမှုကို> ၁၅ နှစ်ကြာအာရုံစိုက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ မှနာတာရှည်ထိတွေ့မှု အလွဲသုံးစားမှုလှုံ့ဆော်ဆေးဝါးများ NAc ၏အလယ်အလတ် spiny အာရုံခံ၏ dendritic ကျောရိုးသိပ်သည်းဆ, DL-type အမျိုးအစားအာရုံခံအဘို့အလွှမ်းမိုးမယ့်ပြောင်းလဲမှုကိုတိုးပွားစေ.67,81,82 အခြို့သောသက်သေအထောက်အထားများကိုဤအမြင်နှင့်မကိုက်ညီကြောင်းပေမယ့်ကျောရိုး၏ induction ဤမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုမှထိခိုက်အပြုအမူတုံ့ပြန်မှုနှင့်အတူပါဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဘို့ဆက်နွယ်လျက်ရှိသည်။
Synaptic plasticity ၏လေ့လာမှုများနှင့်ဝသကဲ့သို့, သို့သော်, ပို. အလုပ် system ကမူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးသင်တန်း, ရုပ်သိမ်းရေးနှင့် relapse ကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်ကြောင်း dendritic ကျောရိုးအတွင်းအပြောင်းအလဲများကိုသတ်မှတ်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ Sinvestigator- နှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမူးယစ်ဆေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယနေ့အထိ tudies, core ကိုငျဒသေနှိုင်းယှဉ်ကွဲပြားခြားနားသောဆုတ်ခွာအချိန်အချက်များမှာ NAc shell ကိုဖြစ်ပေါ်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောကျောရိုးအပြောင်းအလဲများကိုအကြံပြု.83-86 ဒါဟာအစကိုကင်းသို့မဟုတ်အခြားလှုံ့ဆော်သည်ဤအချိန်-မှီခိုနှင့်ဆဲလ်-type အမျိုးအစားသတ်သတ်မှတ်မှတ်သက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်ထားတဲ့အားဖြင့်တိကျသောမော်လီကျူးယန္တရားများသတ်မှတ်ရန်အရေးကြီးပါသည်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ΔFosB DL-type အမျိုးအစား NAc အာရုံခံအပေါ်နုကျောရိုး၏ induction များအတွက်လိုအပ်သောနှင့်လုံလောက်သောနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပြထားပြီး.35,51,67 ထိုသို့သောစည်းမျဉ်းကိုကင်းနှင့်အ actin cytoskeleton ၏ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းထိန်းချုပ်ဖို့လူသိများအများအပြားပရိုတိန်း၏ΔFosBစည်းမျဉ်းနှင့်အတူဖျော်ဖြေပွဲကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ကိုယ့်တဦးတည်းသာဓကအဖြစ်အများအပြား guanine ဘေ့လဲလှယ်အချက်များနှင့် GTPase ကိုသက်ဝင်ပရိုတိန်း၏မှတ်တမ်းစည်းမျဉ်းတစ်ဦးချင်းစီကိုကင်းထိတွေ့တုန့်ပြန်လုပ်ဆောင်မှုအတွက်ယာယီလျှောက်လျော့နည်းဘို့, Rac1, သေးငယ်တဲ့ GTPase poises နှင့် Rac1 လှုပ်ရှားမှုထိုသို့သော pulsatile လျှောက်လျော့နည်း optogenetic ထိန်းချုပ်မှုကို အသုံးပြု. ပြသပြီ Rac1 ၏, နုကျောရိုး၏ induction ပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်။87 Racl ဤသက်ရောက်မှုမရှိဟုယူဆရသည်၎င်း၏ cofilin များ၏ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်လည်းကျောရိုးဖွံ့ဖြိုးမှု၏ကင်းစည်းမျဉ်းပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်ပြခဲ့ကြသောအခြား actin စည်းမျဉ်းပရိုတိန်း, မှတဆင့်ပေါ်ပေါက်ပါတယ်။87,88 သို့သော်၎င်းသည်ကိုကင်း၏မရင့်ကျက်သောကျောရိုးများကိုစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးတွင်ပါ ၀ င်သည့်လမ်းကြောင်းတစ်ခုသာဖြစ်ကြောင်းအလေးပေးရန်အရေးကြီးသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်အခြားပရိုတိန်းများသည် CDK5 (Cyclin-based kinase-5)၊ CaMKII၊ အနည်းငယ်ဖော်ပြရန် MEF2၊ CREB, G9a နှင့် DNMT3 (DNA methyltransf ဖျက်ပစ် 3a) ။20,21,35,51,67,89,90 စိတ်ဝင်စားစရာ G5a ၏ CDK9, CaMKII နှင့် NFkB ၏ induction နှင့်ဖိနှိပ်မှုများအပါအဝင်ထိုအမျိုးဗီဇ၏အတော်ကြာ၏ကင်းစည်းမျဉ်း, ကိုလည်းΔFosBမှတဆင့်ကမကထပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။20,35,51,91
အံ့သြစရာကောင်းတာကအလွဲသုံးစားမှု opiate မူးယစ်ဆေးဝါးများဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကွိုးစားအားထုနှင့် NAc အလတ်စား spiny အာရုံခံ၏ dendritic ကျောရိုးသိပ်သည်းဆကိုလျော့ချ.81 Little ကဒီလိုက်လျောညီထွေများ၏အမူအကျင့်အကျိုးဆက်များနှင့်ပတ်သက်သည့်နောက်ခံမော်လီကျူးယန္တရားများနှင့် ပတ်သက်. လူသိများသည်။ ဤဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပါသည်, CREB နှင့်ΔFosBစိတ်ကြွဆေးနှင့် opiates နှစ်ဦးစလုံးအားဖြင့်သွေးဆောင်နေကြသည်နှင့်နှစ်ဦးစလုံး NAc dendritic ကျောရိုးသိပ်သည်းဆ၏လှုံ့ဆော်-mediated သော induction အတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသည်ဟုပေးထားသောသို့သော်အံ့သြစရာ. ဤသည် opiates ကဤအချက်များသူတို့ရဲ့သော induction ရှိနေသော်လည်း NAc ကျောရိုးသိပ်သည်းဆဖိနှိပ်ဘယ်လိုများ၏မေးစရာများရှိနေပါသည်။
မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုမော်ဒယ်များတွင်တွေ့မြင် morphological plasticity ၏အခြားအဓိကပုံစံနာတာရှည် opiate အုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်သွေးဆောင် VTA dopamine အာရုံခံ၏ဆဲလ် Soma အရွယ်အစားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလျှော့ချရေးဖြစ်ပါသည်.77,92,93 အလားတူလိုက်လျောညီထွေ cannabinoids တုံ့ပြန်ကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။94 opiate ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အတူဖြစ်ပေါ်ရသော VTA dopamine အာရုံခံ၏ဤကျုံ့,93 နှင့်လူ့ဘိန်းဖြူစွဲများတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည် postmortem ဆန်းစစ်,77 ဆုလာဘ်သည်းခံစိတ်ပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်ပုံရသည်နှင့် NAc အတွက်လျှော့ dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်. စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာသက်သေအထောက်အထားယခုဆဲလ် Soma အရွယ်အစား၌ဤလျှော့ချရေးဦးနှောက်-ဆင်းသက်လာ neurotrophic အချက် (BDNF) ဤအာရုံခံအတွင်းထုတ်ဖော်ပြောဆို opiate ဖိနှိပ်မှုကကမကထပြုခဲ့ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ကျနော်တို့တိုက်ရိုက် VTA dopamine အာရုံခံအတွက်ကက်စကိတ်အချက်ပြမြစ်အောက်ပိုင်း BDNF ၏လျော့ချလှုပ်ရှားမှုရန်, IRS2 (အင်ဆူလင်အဲဒီ receptor အလွှာ-2), AKT (က serine-threonine ၏အထူးလျှော့လှုပ်ရှားမှုကဒီ opiate-သွေးဆောင် BDNF ထောက်ခံမှုရုပ်သိမ်းနှင့် VTA အာရုံခံဆဲလျကျုံ့နှင့်ဆက်စပ်ပါပြီ kinase), နှင့် TORC2 rapamycin မှအာရုံမခံစားနိုင်သောအရာ rapamycin-2 ၏ (ပစ်မှတ်) ။77,93 ငါတို့သည်လည်းအစောပိုင်းကမှတ်ချက်ပြုအဖြစ်မော်ဖင်းအကိုက်အဲဒီအာရုံခံအတွက် induces သောတိုးချဲ့စိတ်လှုပ်ရှားတိုက်ရိုက်ပြ BDNF ၏ဤ downregulation နှင့်ဆက်စပ်ပါပြီ။77,78 တဦးတည်း၏ induction အခြားခြင်းနှင့်အပြန်အလှန်ပို့ဆောင်အဖြစ်အမှန်မှာထိုလျော့နည်းသွားဆဲလ် Soma အရွယ်အစားနှင့်တိုးမြှင့်စိတ်လှုပ်ရှားတင်းကျပ်စွာ, coupled နေကြသည်။ ဆဲလ်စိတ်လှုပ်ရှားကျော်ဒါဟာထိန်းချုပ်မှု K သည်၏ဖိနှိပ်မှုကပါဝင်ပတ်သက်+ လိုင်းများနှင့်ဂါဘမြို့သားများA ဤအအာရုံခံအတွက်လက်ရှိ။
အဆိုပါ VTA များ၏အဆင့်မှာမော်ဖင်းအကိုက်တုံ့ပြန်မှုကိုထိန်းချုပ်အတွက် BDNF အဘို့ဤအခန်းကဏ္ဍကိုကင်းနှင့်အခြားစိတ်ကြွဆေး၏လုပ်ရပ်များအတွက်၎င်း၏အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေနဲ့ခြားနားနေသည်။ စိတ်ကြွဆေးကတော့ NAc, BDNF ၏တိုးမြှင့်ဒေသခံပေါင်းစပ်အဖြစ်အများအပြား afferent ဒေသများထံမှတိုးမြှင့်ဖြန့်ချိမှုကြောင့်တစ်ဦးအကျိုးသက်ရောက်ရန်အချက်ပြ BDNF သွေးဆောင်။95 ထိုမှတပါး, BDNF NAc အတွက်, ဒါပေမယ့်မ VTA အတွက်အချက်ပြတိုးမြှင့်, သူတို့ရဲ့ Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပါအဝင်ဒီဆေးတွေရဲ့အမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများမြှင့်တင်ရန်ပြသလျက်ရှိသည်။95,96 opiates နှင့် stimulants များဖြင့် VTA-NAc လမ်းကြောင်းတွင် BDNF အချက်ပြမှု၏ဆန့်ကျင်ဘက်စည်းမျဉ်းသည်ထိုကဲ့သို့သောကွဲပြားခြားနားမှုများသည် NAc dendritic spines များ၏မူးယစ်ဆေးဝါး၏ဆန့်ကျင်ဘက်စည်းမျဉ်းကိုယခုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရန်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။
အထက်ပါဇာတ်ကြောင်းအလွဲသုံးစားမှုတစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးဖို့ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့မှုမှတုံ့ပြန်မှု၌၎င်း, စွဲ syndrome အချို့အပြုအမူ features တွေဖို့တစ်ဦးချင်းစီအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်သက်ဆိုင်သောအတွက်တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်ဦးနှောက်ဆုလာဘ်ဒေသများတွင်ပေါ်ပေါက်သောမော်လီကျူးများနှင့်ဆယ်လူလာအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်နားလည်ကြပြီသောကြီးမားတဲ့တိုးတက်မှုအလေးပေး ။ ဤအတိုးတက်လာနေသော်လည်းအဓိကမေးခွန်းများကိုရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိအသိပညာအများစုဟာလည်းမူးယစ်ဆေးစွဲများအတွက်အလွန်အရေးပါများမှာအခြားသော့ချက် limbic ဦးနှောက်ဒေသများအကြောင်းကိုမရရှိနိုင်တာကိုလျော့နည်းသတင်းအချက်အလက်နှင့်တကွ, VTA နှင့် NAc အာရုံစိုက်။ ထို့အပြင်တစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်သည့်အပြုအမူအတွက်မော်လီကျူး-ဆယ်လူလာလိုက်လျောညီထွေ၏ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်အခန်းကဏ္ဍအားလုံးစမ်းသပ်ဆန္ဒပြပွဲများတစ်ကြိမ်တစ်ဦးချင်းစီအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်တဦးတည်းကြိုးကိုင်ပါပြီ။ တစ်ချိန်တည်းမှာမြောက်မြားစွာအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင် manipulate ဖို့ရှင်းလင်းစွာ ပို. ခက်ခဲသည်, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်မူးယစ်ဆေးဝါးများဖွယ်ရှိအပြုအမူကိုသြဇာလွှမ်းမိုးဖို့ရှုပ်ထွေးနည်းလမ်း summate ရာပင်တစ်ဦးချင်းစီတွင် neuron အတွင်းအပြောင်းအလဲများကို၏မတူညီသောအမျိုးအစားများကြီးမားတဲ့အရေအတွက်ကိုထုတ်လုပ်သည်ကိုသင်တို့သိကတည်းကကလည်းမရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ ထိုသို့သောစနစ်များကိုဇီဝဗေဒချဉ်းကပ်နောက်ဆုံးမှာစွဲ၏ဇီဝကျောထောက်နောက်ခံပြုနှိမ်နင်းရန်အလွန်အရေးပါဖြစ်လိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့အမူအကျင့်မှတ်ဉာဏ်၏ဇီဝအခြေခံကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ရှိသမျှသည်အခြားသောကြိုးပမ်းမှုများကိုယခုရုန်းကန်ရသောမှာအမှတ်မှာမိမိတို့ကိုယ်ကိုရှာတွေ့ addiction နှင့်ပတ်သက်သောအမှတ်တရများ၏မော်လီကျူး-ဆယ်လူလာယန္တရားများကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အားထုတ်မှု: ရှုပ်ထွေးသောအပြုအမူမှတ်ဉာဏ်မှဇီဝဖြစ်စဉ်များပြန်ပြောပြဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုအလွန်အမင်းခက်ခဲဖြစ်နေဆဲပင်။ ဒီသွေးခွဲကျော်လွှားခြင်းအတွက် neuroscience အတွက်ဖြစ်ကောင်းအကြီးမားဆုံးသောစိန်ခေါ်မှုကိုယ်စားပြုတယ်။
တစ်ဦး Fos မိသားစုကူးယူအချက်
ဦးနှောက်-ဆင်းသက်လာ neurotrophic အချက်
1 ။ Hyman SE ။ , Malenka RC ။ , Nestler EJ ။ စွဲလမ်း၏အာရုံကြောယန္တရားများ: ဆုလာဘ်-related သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်၏အခန်းကဏ္ဍကို။ Annu ဗြာ neuroscience ။ 2006; 29: 565-598 ။ [PubMed]
2 ။ ဝမ် JC ။ , Kapoor ကအမ်, ဆိတ်လေး။ ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုများ၏မျိုးရိုးဗီဇ။ Annu ဗြာ Genomics Hum မျိုးရိုးဗီဇ။ 2012; 13: 241-261 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
3 ။ Kandel DB ။ , ယာမာဂူချီ K. , Klein LC ။ အဆိုပါဂိတ်ဝေးအယူအဆစမ်းသပ်။ စွဲလမ်း။ 2006; 101: 470-472 ။ [PubMed]
4. Kalivas PW ။ , O'Brien C. မူးယစ်ဆေးဝါးသည်အာရုံကြောဆိုင်ရာအဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသည်။ Neuropsychopharmacology ။ 2008; 33: 166-180 ။ [PubMed]
5 ။ Nestler EJ ။ စွဲအခြေခံရေရှည် plasticity ၏မော်လီကျူးအခြေခံ။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2001; 2: 119-128 ။ [PubMed]
6 ။ Nestler EJ ။ စွဲလမ်းနှင့်မှတ်ဉာဏ်၏ဘုံမော်လီကျူးများနှင့်ဆယ်လူလာအလွှာဟာ။ Neurobiol မှတ်ဉာဏ်လေ့လာပါ။ 2002; 78: 637-647 ။ [PubMed]
7 ။ Kalivas PW ။ , Volkow ND ။ စွဲလမ်းမှု၏အာရုံကြောအခြေခံ: လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုရောဂါဗေဒ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005; 162: 1403-1413 ။ [PubMed]
8 ။ Robbins TW ။ , Ersche KD ။ , Everitt BJ ။ မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်ဦးနှောက်၏မှတ်ဉာဏ်စနစ်များကို။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2008; 1141: 1-21 ။ [PubMed]
9 ။ Nestler EJ ။ စွဲလမ်းတစ်ဘုံမော်လီကျူးလမ်းကြောင်းရှိပါသလား? နတ် neuroscience ။ 2005; 8: 1445-1449 ။ [PubMed]
10 ။ McClung CA. , Nestler EJ ။ CREB နှင့်ΔFosBအားဖြင့်မျိုးရိုးဗီဇစကားရပ်များနှင့်ကင်းဆုလာဘ်၏စည်းမျဉ်း။ နတ် neuroscience ။ 2003; 11: 1208-1215 ။ [PubMed]
11 ။ Freeman က WM ။ , Nader, MA ။ , Nader SH ။ , Non-လူ့မျောက်နျူကလိယအတွက် et al နာတာရှည်ကင်း-mediated အပြောင်းအလဲများကိုဗီဇစကားရပ် accumbens ။ J ကို Neurochem ။ 2001; 77: 542-549 ။ [PubMed]
12 ။ Yao အဘိဓါန် WD ။ , Gainetdinov RR ။ , Arbuckle ML ။ , et dopamine-mediated Synaptic နှင့်အမူအကျင့် plasticity တစ်ဦးထိန်းညှိအဖြစ် PSD-95 ၏အယ်လ်သတ်မှတ်ခြင်း။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2004; 41: 625-638 ။ [PubMed]
13 ။ Yuferov V. , Nielsen ဃ, Butelman အီး, Kreek MJ ။ မျိုးဗီဇစကားရပ်ထဲမှာ psychostimulant-သွေးဆောင်ပြောင်းလဲမှုများ Microarray လေ့လာမှုများ။ စှဲလမျးသူ Biol ။ 2005; 10: 101-118 ။ [PubMed]
14 ။ Albertson DN ။ , Schmidt က CJ ။ , Kapatos G. အ, Bannon MJ ။ ကိုကင်းနှင့်ဘိန်းဖြူအလွဲသုံးစားမှုနဲ့ဆက်စပ်လူ့နျူကလိယ accumbens အတွက်မျိုးဗီဇစကားရပ်၏ကွဲပြားခြားနားသောပရိုဖိုင်း။ Neuropsychopharmacology ။ 2006; 31: 2304-2312 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
15 ။ zhou Z. , ယွမ်ဆိုးကျိုး, mash DC က။ , Goldman ဃပစ္စည်းတိကျတဲ့နှင့် shared ကူးယူခြင်းနှင့်နာတာရှည်ကိုကင်းနှင့်အရက်ထိတွေ့လူ့ hippocampus အတွက်ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုအပြောင်းအလဲများကို။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2011; 108: 6626-6631 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
16 ။ Ponomarev ဗြဲ, ဝမ်အက်စ်, Zhang ကအယ်လ်, Harris က RA ။ , Mayfield RD ။ လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာမျိုးဗီဇ coexpression ကွန်ရက်များအရက်မှီခိုအတွက်ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုပြုပြင်မွမ်းမံခွဲခြားသတ်မှတ်။ J ကို neuroscience ။ 2012; 32: 1884-1897 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
17 ။ Sillivan SE ။ , Whittard JD ။ , Jacobs MM ။ , et လူ့ဘိန်းဖြူချိုးဖောက် dysregulated striatal mu opioid အဲဒီ receptor အချက်ပြကွန်ယက်နှင့် OPRM1 polymorphic ဆက်စပ်အယ်လ် ELK1 ကူးယူအချက်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2013; 74: 511-519 ။ [PubMed]
18 ။ Carlezon WA Jr ဂျေ, Thome ဂျေ, Olson VG ။ , ယာဉ်ကြော-Ladd SB ။ , Brodkin ES ။ , Hiroi N. , Duman သည် RS ။ , Neve RL ။ , Nestler EJ ။ CREB အားဖြင့်ကိုကင်းဆုလာဘ်၏စည်းမျဉ်း။ သိပ္ပံ။ 1998; 18: 2272-2275 ။ [PubMed]
19 ။ Walters က CL ။ , Cleck ဖြစ်မှု။ , Kuo က YC ။ , Blendy ဂျေအေ။ mu-opioid အဲဒီ receptor နှင့် CREB activation နီကိုတင်းအကျိုးသည်လိုအပ်သည်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2005; 46: 933-943 ။ [PubMed]
20 ။ Russo SJ ။ , Wilkinson ကို MB ။ , Mazei-Robison က MS ။ , et al နျူကလီးယားအချက် kB အချက်ပြအာရုံခံ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်နှင့်ကိုကင်းဆုလာဘ်ထိန်းညှိ။ J ကို neuroscience ။ 2009; 29: 3529-3537 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
21 ။ Pulipparacharuvil အက်စ်, Renthal ဒဗလျူ, Hale က CF. , et al ကင်း Synaptic နှင့်အမူအကျင့် plasticity ထိန်းချုပ်ဖို့ MEF2 ထိန်းညှိ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2008; 59: 621-633 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
22 ။ BT Nye HE ။ မျှော်လင့်ပါတယ်။ , Kelz ကို MB ။ နာတာရှည်ကိုကင်းနှင့်အခြားနာတာရှည်ကုသမှုအားဖြင့်ဦးနှောက်ထဲမှာပြောင်းလဲ Fos တူသောပရိုတိန်း၏ရေးစပ်တဲ့ကြာရှည်ခံ AP-1 ရှုပ်ထွေးသော၏, et al induction ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 1994; 13: 1235-1244 ။ [PubMed]
23 ။ Shaw-Lutchman tz ။ , Barrot အမ်, Wallace, et al ဒေသဆိုင်ရာနှင့် naltrexone-precipitated မော်ဖင်းအကိုက်ဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း CRE-mediated ကူးယူ၏ဆယ်လူလာမြေပုံ။ J ကို neuroscience ။ 2002; 22: 3663-3672 ။ [PubMed]
24 ။ Shaw-Lutchman SZ ။ , Impey အက်စ်, မုန်တိုင်းဃ, Nestler EJ ။ စိတ်ကြွဆေးများက mouse ကိုဦးနှောက်အတွက် CREmediated ကူးယူ၏စည်းမျဉ်း။ synapses ။ 2003; 48: 10-17 ။ [PubMed]
25 ။ Altarejos JY, Montminy အမ် CREB နှင့် CRTC Co-လုပ်ဆောင်ချက်: ။ ဟော်မုန်းများနှင့်ဇီဝဖြစ်စဉ်အချက်ပြမှုများများအတွက်အာရုံခံကိရိယာ။ နတ်ဗြာ Mol ဆဲလ် Biol ။ 2011; 12: 141-151 ။ [PubMed]
26 ။ Barrot အမ်, Olivier JDA ။ , Perrotti LI ။ , အနျူကလိယအတွက် et al CREB လှုပ်ရှားမှုစိတ်ခံစားမှုလှုံ့ဆော်မှုမှအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုများ shell ကိုထိန်းချုပ်မှု Gates accumbens ။ proc နတ် Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2002; 99: 11435-11440 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
27 ။ Dinieri ဂျေအေ။ , Nemeth CL ။ , အနျူကလိယ accumbens အတွင်းစခန်းတုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင်-binding ပရိုတိန်း function ကို၏သွေးဆောင်နှောင့်အယှက်တွေနဲ့ကြွက်တွေမှာကြိုးနဲ့ဆန္ဒရှိမူးယစ်ဆေးဝါးများမှ Parsegian အေ, et al ALTER sensitivity ကို။ J ကို neuroscience ။ 2009; 29: 1855-1859 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
28 ။ နျူကလီးယပ်အတွက် Larson eb ။ , ဂရေဟမ် DL ။ , Arzaga RR ။ , et CREB ၏အယ်လ် Overexpression shell ကို Self-စီမံခန့်ခွဲကြွက်များတွင်ကင်းအားဖြည့်တိုးပွါး accumbens ။ J ကို neuroscience ။ 2009; 31: 16447-16457 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
29 ။ Josselyn လုပ် SA ။ , ငုယင်မှာ PV ။ CREB, synapses နှင့်မှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်း: အတိတ်တိုးတက်မှုနှင့်အနာဂတ်စိန်ခေါ်မှုများ။ Curr မူးယစ်ဆေး CNS Neurol disorders ပစ်မှတ်ထား။ 2005; 4: 481-497 ။ [PubMed]
30 ။ Kandel ER ။ မှတ်ဉာဏ်၏မော်လီကျူးဇီဝဗေဒ: စခန်း, PKA, CRE, CREB-1, CREB-2 နှင့် CPEB ။ Mol ဦးနှောက်။ 2012; 5: 14-14 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
31 ။ Tully တီ, Bourtchouladze R. , Scott R. , Tallman ဂျေမှတ်ဉာဏ် enhancers များအတွက် CREB လမ်းကြောင်း Targeting ။ နတ်ဗြာမူးယစ်ဆေး Discover ။ 2003; 2: 267-277 ။ [PubMed]
32 ။ Renthal ဒဗလျူ, Kumar ကအေ, Xiao GH ။ , ကိုကင်းများက chromatin စည်းမျဉ်းများ et al ဂြီနိုကျယ်ပြန့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ sirtuins များအတွက်ဝတ္ထုအခန်းကဏ္ဍဖော်ပြသည်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2009; 62: 335-348 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
33. Hiroi N. , Brown J. , Haile C. , et al FosB Mutant ကြွက်များ - Fos နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ပရိုတင်းများကိုနာတာရှည်ကိုကင်းများနှိမ်နင်းခြင်းနှင့်ကိုကင်း၏စိတ်ကိုသိမ်မွေ့ခြင်းနှင့်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများမြင့်တက်လာခြင်း။ proc Natl Acad သိပ္ပံဦး SA ။ 1997; 94: 10397-10402 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
34 ။ Nestler EJ ။ စွဲလမ်း၏မှတ်တမ်းယန္တရားများ: deltaFosB ၏အခန်းကဏ္ဍ။ ဖီလိုဖြတ်ကျော် R ကို Soc လန်ဒန် B ကို Biol သိပ္ပံ။ 2008; 363: 3245-3255 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
35 ။ Robison AJ ။ , Vialou V. , Mazei-Robison အမ်, et al အပြုအမူများနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုနာတာရှည်ကင်းဖို့နျူကလိယအတွက်ΔFosBနှင့် CaMKII ပတျသကျတဲ့အစာကျွေးခြင်း-ရှေ့ဆက်ကွင်းဆက် shell ကို accumbens လိုအပ်သည်။ J ကို neuroscience ။ 2013; 33: 4295-4307 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
36 ။ Kelz ကို MB ။ , Chen ကဂျေ, Carlezon WA ဂျူနီယာကင်းဖို့ဦးနှောက်ထိန်းချုပ်မှု sensitivity ကိုအတွက်ကူးယူအချက်ΔFosB၏ et al Expression ။ သဘာဝ။ 1999; 401: 272-276 ။ [PubMed]
37 ။ Colby CR ။ , Whisler K. , Steffen C. , Nestler EJ ။ , ကိုယ်ပိုင် DW ။ ΔFosBကင်းဘို့မက်လုံးပေးပိုကောင်းစေပါတယ်။ J ကို neuroscience ။ 2003; 23: 2488-2493 ။ [PubMed]
38 ။ Zachary V. , Bolanos CA. , Selley DE, et al ΔFosB။ မော်ဖင်းအကိုက်အရေးယူအတွက်နျူကလိယ accumbens အတွက်ΔFosBဘို့တစ်ခုမရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍ။ နတ် neuroscience ။ 2006; 9: 205-211 ။ [PubMed]
39 ။ Ehrlich ME ။ , Sommer ဂျေ, ကာနအီး, Unterwald EM ။ Periadolescent ကြွက်တွေကိုကင်းနှင့်အဖက်တမင်းမူးယစ်ဆေးဝါးတုံ့ပြန်တိုးမြှင့် DeltaFosB upregulation ပြသပါ။ J ကို neuroscience ။ 2002; 22: 9155-9159 ။ [PubMed]
40 ။ Levine အေ, Huang က Y. , Drisaldi ခ, et တစ်ဂိတ်ဝေးမူးယစ်များအတွက်အယ်လ်မော်လီကျူးယန္တရား: ကိုကင်းများကနီကိုတင်းချုပ်ဗီဇစကားရပ်အားဖြင့်အစပျိုးဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုအပြောင်းအလဲများကို။ သိပ္ပံဘာသာပြန် Med ။ 2011; 3: 107-109 ။ [PubMed]
41 ။ Renthal ဒဗလျူ, Carl TL ။ , ဝင်္ဗြဲ, et al ΔFosBနာတာရှည်စိတ်ကြွဆေးထိတွေ့ပြီးနောက်က c-fos ဗီဇ၏ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှု desensitization mediates ။ J ကို neuroscience ။ 2008; 28: 7344-7349 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
42 ။ Winstanley CA. , LaPlant ဆိုးကျိုး, Theobald DEH ။ , orbitofrontal cortex အတွက် et al ΔFosBသော induction ကင်း-သွေးဆောင်သိမြင်မှုကမောက်ကမဖြစ်မှုမှသည်းခံစိတ် mediates ။ J ကို neuroscience ။ 2007; 27: 10497-10507 ။ [PubMed]
43 ။ ။ ။ Winstanley CA. , Bachtell RK, Theobald DEH, et al ကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုကနေဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း Impulse တိုးမြှင်: အ orbitofrontal cortex အတွက်ΔFosBများအတွက်အခန်းကဏ္ဍ။ Cereb Cortex ။ 2009; 19: 435-444 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
44 ။ Robison AJ ။ , Nestler EJ ။ မှတ်တမ်းနှင့်စွဲလမ်း၏ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုယန္တရား။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2011; 12: 623-637 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
45 ။ နေ့ JJ ။ , Sweatt JD ။ သိမှတ်ခံစားမှုထဲမှာဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်ယန္တရားများ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2011; 70: 813-829 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
46 ။ ဂွမ် Z. , Giustetto အမ်, Lomvardas အက်စ်, et ရေရှည်-မှတ်ဉာဏ်-related Synaptic plasticity ၏အယ်လ်ပေါင်းစည်းရေးဗီဇစကားရပ်နှင့် chromatin ဖွဲ့စည်းပုံ၏ bidirectional စည်းမျဉ်းပါဝငျသညျ။ cell ။ 2002; 111: 483-493 ။ [PubMed]
47 ။ Graff ဂျေ, Tsai LH ။ Histone acetylation: အ chromatin အပေါ်မော်လီကျူး mnemonics ။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2013; 14: 97-111 ။ [PubMed]
48 ။ Peixoto L. , အာဗေလတီမှတ်ဥာဏ်ဖွဲ့စည်းရေးနှင့်သိမြင်မှုချို့ယွင်းအတွက် histone acetylation ၏အခန်းကဏ္ဍ။ Neuropsychopharmacology ။ 2013; 38: 62-76 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
49 ။ Rogge GA ။ , Wood ကနေ MA ။ ကိုကင်း-သွေးဆောင်အာရုံကြော plasticity နှင့်အပြုအမူများတွင် histone acetylation ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ Neuropsychopharmacology ။ 2013; 38: 94-110 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
50 ။ Gupta-Agarwal အက်စ်, Franklin AV စနစ်။ , Deramus တီ, et al G9a / GLP histone lysine ဟာ hippocampus အတွက်ရှုပ်ထွေးလှုပ်ရှားမှု dimethyltransferase နှင့် entorhinal cortex မှတ်ဉာဏ်စုစည်းပြီးစဉ်အတွင်းဗီဇ activation နှင့်ငြိမ်ဝပ်စွာနေဘို့လိုအပ်ပါသည်။ J ကို neuroscience ။ 2012; 32: 5440-5453 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
51 ။ ဝင်္ဗြဲ, Covington HE III ကို။ , Dietz DM ။ ကင်း-သွေးဆောင် plasticity အတွက် histone methyltransferase G9a ၏, et al မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍ။ သိပ္ပံ။ 2010; 327: 213-216 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
52 ။ နျူကလိယ accumbens အတွက် histone H3 lysine9dimethylation မြားတှငျပွောငျးလဲမှတဆင့် Sun က HS ။ , ဝင်္ဗြဲ, Dietz DM ။ , et al မော်ဖင်းအကိုက်ပီဂြီနိုမျစညျးမဉျြးစညျးကမျးအပြုအမူ။ J ကို neuroscience ။ 2012; 32: 17454-17464 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
53 ။ mouse ကိုနျူကလိယ accumbens အတွက်ကင်းလုပ်ဆောင်ချက် Shen L. , Feng တို့ဂျေ, Wilkinson အမ်, et al ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်စည်းမျဉ်း။ Soc neuroscience ABS ။ 2011; 108: 3035-3040 ။
54 ။ dopamine2အဲဒီ receptor-ဖော်ပြအာရုံခံအတွက် Schaefer အေ, Im HL ။ , Veno MT ။ , et al Argonaute2ကိုကင်းစွဲထိန်းညှိ။ J ကို Exp Med ။ 2010; 207: 1843-1851 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
55 ။ Eipper-Main je ။ , Kiraly DD ။ , Palakodeti ဃ, Main RE ။ , Eipper BA ဘွဲ့။ , Graveley BR ။ microRNA-Seq striatal microRNAs ၏ကင်း-စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်စကားရပ်ဖော်ပြသည်။ RNA ။ 2011; 17: 1529-1543 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
56 ။ Holland ဂျေအေ။ , Im HL ။ , Amelio AL ။ , et al Striatal microRNA CREB အချက်ပြမှတဆင့်ကင်းစားသုံးမှုထိန်းချုပ်သည်။ သဘာဝ။ 2010; 466: 197-202 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
57 ။ Luscher C. , Malenka RC ။ စွဲလမ်းထဲမှာမူးယစ်ဆေး-evoked Synaptic plasticity: မော်လီကျူးအပြောင်းအလဲများကနေပတ်လမ်းအသစ်ပြန်ပြုပြင်ရန်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2011; 69: 650-663 ။ [PubMed]
58 ။ Kauer ဂျေအေ။ , Malenka RC ။ Synaptic plasticity နှင့်စွဲလမ်း။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2007; 8: 844-858 ။ [PubMed]
59 ။ သောမတ်စ် MJ ။ , Beurrier C. , Bonci အေ, Malenka RC ။ နျူကလီးယပ်အတွက်ရေရှည်စိတ်ကျရောဂါ accumbens: ကင်းရန်အမူအကျင့်အကဲဆတ်ခြင်းတစ်ဦးအာရုံကြော Correlate ။ နတ် neuroscience ။ 2001; 4: 1217-1223 ။ [PubMed]
60 ။ Kourrich အက်စ်, Klug JR ။ , Mayford အမ်, သောမတ်စ် MJ ။ striatal αCaMKII၏ AMPAR-လွတ်လပ်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကင်းဆုလာဘ်များထိခိုက်လွယ်ကိုအားပေးအားမြှောက်။ J ကို neuroscience ။ 2012; 32: 6578-6586 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
61 ။ ME Wolf ။ ကိုကင်း-သွေးဆောင် neuroadaptations ၏ဘာမြူဒါတြိဂံ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 2010; 33: 391-398 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
62 ။ Purgianto အေ, Scheyer AF ။ , Loweth ဂျေအေ။ , Ford ကား Ka ။ , Tseng KY ။ , ME Wolf ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် AMPA အဲဒီ receptor ဂီယာအတွက်အခြားသော adapter ရှည်လျား access ကိုကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး regimen vs တိုတောင်းပြီးနောက်။ Neuropsychopharmacology ။ 2013; 38: 1789-1792 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
63 ။ အန်ဒါဆင်သည် SM, နာမည်ကြီး KR, Sadri-Vakili G. အ, et al CaMKII: ။ ။ ကိုကင်းရှာထဲမှာ accumbens dopamine နဲ့အချိုမှုစနစ်များကိုချိတ်ဆက်နေတဲ့ထဲကဓာတုပစ်စညျးတံတား။ နတ် neuroscience ။ 2008; 11: 344-353 ။ [PubMed]
64 ။ Loweth ဂျေအေ။ , အဆိုတော် BF ။ , Baker LK ။ , အနျူကလိယအတွက် alphaCa2 + / calmodulin-မှီခိုပရိုတိန်း kinase II ၏ et al ယာယီ overexpression shell ကိုစိတ်ကြွဆေးတုံ့ပြန်အပြုအမူပိုကောင်းစေပါတယ် accumbens ။ J ကို neuroscience ။ 2010; 30: 939-949 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
65 ။ ။ Lee က BR, အနျူကလိယထဲမှာဒေါင် Y. ကင်း-သွေးဆောင် metaplasticity accumbens: အသံတိတ် synapses နှင့်ကျော်လွန်ပြီး။ Neuropharmacology ။ 2011; 61: 1060-1069 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
66 ။ ဘရောင်း TE ။ , Lee က BR ။ , Mu P. , et al ကင်း-သွေးဆောင် locomotor ာင်းတစ်ဦးကအသံတိတ် synapses-based ယန္တရား။ J ကို neuroscience ။ 2011; 31: 8163-8174 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
67 ။ Grueter BA ဘွဲ့။ , Robison AJ ။ , Neve RL ။ , Nestler EJ ။ , Malenka RC ။ ΔAFosB differential နျူကလိယကိုတိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်း function ကို accumbens modulates ။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2013; 110: 1923-1928 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
68 ။ Pascoli V. , ကိုကင်း-evoked Synaptic အလားအလာ Turiault အမ်, Luscher C. ပြောင်းပြန်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်သပ္ပါယ်အပြုအမူ reset လုပ်တယ်။ သဘာဝ။ 2011; 481: 71-75 ။ [PubMed]
69 ။ accumbens nucleus ဖို့ amygdala ကနေ Stuber GD ။ , Sparta DR ။ , Stamatakis လေး။ , et al Excitatory ဂီယာဆုလာဘ်ရှာနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ သဘာဝ။ 2011; 475: 377-380 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
70 ။ Chen က BT ။ , Yau HJ ။ , Hatch C. , Kusumoto-Yoshida ဗြဲ, ချို SL ။ , Hopf အက်ဖ်ဒဗလျူ။ , ကိုကင်း-သွေးဆောင် prefrontal cortex hypoactivity ကယ်ဆယ်ရေး Bonci အေ compulsive ကင်းရှာကာကွယ်ပေးသည်။ သဘာဝ။ 2013; 496: 359-362 ။ [PubMed]
71 ။ Turrigiano GG ။ အာရုံခံကွန်ရက်မှာ Homeostatic plasticity: အမှုအရာကိုပြောင်းပို, ပိုသူတို့အတူတူနေဖို့။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 1999; 22: 221-227 ။ [PubMed]
72 ။ Kogan JH ။ , Nestler EJ ။ , Aghajanian GK ။ ဓာတ်လှေကား Basal ပစ်ခတ်ရန်နှုန်းထားများနှင့် opiate-မှီခိုကြွက်များကနေဦးနှောက်ကိုအချပ်အတွက် locus coeruleus အာရုံခံအတွက် 8-Br-စခန်းများတိုးမြှင့်တုံ့ပြန်မှု။ EUR J ကို Pharmacol ။ 1992; 211: 47-53 ။ [PubMed]
73 ။ ယာဉ်ကြော-Ladd SB, Pineda ဂျေ, Boundy VA သို့, et al CREB (Camp တုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင်-binding ပရိုတိန်း) ကို locus coeruleus အတွက်။ ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး, ဇီဝကမ္မနှင့် opiate မှီခိုနေတဲ့အခန်းကဏ္ဍများအတွက်အမူအကျင့်သက်သေအထောက်အထား။ J ကို neuroscience ။ 1997; 17: 7890-7901 ။ [PubMed]
74 ။ ဟန် MH, Bolanos CA. , အစိမ်းရောင်က TA ကြွက် locus ceruleus အတွက်စခန်းတုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင်-binding ပရိုတိန်း၏, et al အခန်းက္ပ။ ။ အာရုံခံလှုပ်ရှားမှု၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်အ opiate ဆုတ်ခွာအပြုအမူတွေ။ J ကို neuroscience ။ 2006; 26: 4624-4629 ။ [PubMed]
75 ။ Cao JL ။ , Vialou VF, ။ , Lobo MK ။ locus coeruleus အာရုံခံ၏ opiate-သွေးဆောင် homeostatic အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်အတွက်စခန်း-Camp တုံ့ပြန်မှု-ဒြပ်စင် binding ပရိုတိန်းလမ်းကြောင်း၏, et al မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍ။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 2010; 107: 17011-17016 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
76 ။ dong Y. , အစိမ်းရောင်တီ, Saal ဃ, Marie အိပ်ချ်, Neve R. , Nestler EJ ။ , Malenka RC ။ CREB နျူကလိယ accumbens အာရုံခံ၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် modulates ။ နတ် neuroscience ။ 2006; 9: 475-477 ။ [PubMed]
77 ။ Mazei-Robison က MS ။ , Koo JW ။ , Friedman AK ။ ventral tegmental ဧရိယာ dopamine အာရုံခံအတွက်မော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင်အလိုက်အထိုက်နေတတ် mTOR အချက်ပြခြင်းနှင့်အာရုံခံလှုပ်ရှားမှုအဘို့, et al အခန်းက္ပ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2011; 72: 977-990 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
78 ။ Koo မော်ဖင်းအကိုက်အရေးယူတဲ့အနုတ်လက္ခဏာ modulator တွေကိုအဖြစ် BDNF ၏ JW ။ , Mazei-Robison က MS ။ , Chaudhury ဃ, et al Novell အခန်းကဏ္ဍ။ သိပ္ပံ။ 2012; 338: 124-128 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
79 ။ Carlisle တို့ HJ ။ , ကနေဒီကို MB ။ ဗိသုကာနှင့် Synaptic plasticity ကျောရိုး။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 2005; 28: 182-187 ။ [PubMed]
80 ။ Bosch ရဲ့အမ်, dendritic ကျောရိုး၏ Hayashi Y. ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ plasticity ။ Curr Opin Neurobiol ။ 2012; 22: 383-388 ။ [PubMed]
81 ။ ရော်ဘင်ဆင် TE ။ အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှထိတွေ့မှုနှင့်ဆက်စပ်, Kolb ခဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ plasticity ။ Neuropharmacology ။ 2004;47(suppl 1):33–46. [PubMed]
82 ။ Russo SJ ။ , Dietz DM ။ , Dumitriu ဃ, Morrison JH ။ , Malenka RC ။ , Nestler EJ ။ အဆိုပါစွဲ synapses: နျူကလိယ accumbens အတွက် Synaptic နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ plasticity ၏ယန္တရားများ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 2010; 33: 267-276 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
83 ။ Kalivas PW ။ စွဲလမ်းမှု၏အချိုမှု homeostasis ယူဆချက်။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2009; 10: 561-572 ။ [PubMed]
84 ။ Shen HW ။ , Toda အက်စ်, Moussawi K. , Bouknight အေ, Zahm DS ။ , Kalivas PW ။ ကိုကင်း-ဆုတ်ခွာကြွက်များတွင်ပြောင်းလဲ dendritic ကျောရိုး plasticity ။ J ကို neuroscience ။ 2009; 29: 2876-2884 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
85 ။ Gipson CD ကို။ , Kupchik YM ။ , Shen အိပ်ချ်, Reissner KJ ။ , သောမတ်စ် CA. , Kalivas PW ။ ကိုကင်းခန့်မှန်းတွေကိုအားဖြင့်သွေးဆောင် Relapse လျင်မြန်စွာ, ယာယီ Synaptic အလားအလာအပေါ်မူတည်ပါသည်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2013; 77: 867-872 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
86 ။ Dumitriu ဃ, Laplant ဆိုးကျိုး, မမေ့ဘူး YS ။ , et al ငျဒသေ, dendritic အခန်းတို့နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက် dendritic ကျောရိုး၏ကင်းစည်းမျဉ်းများတွင်ကျောရိုးမျိုးကွဲသတ်မှတ်ချက်။ J ကို neuroscience ။ 2012; 32: 6957-6966 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
87 ။ Dietz DM ။ , Sun က HS ။ , Lobo MK ။ , et al Rad များအတွက်မရှိမဖြစ်နျူကလိယ၏ကင်း-သွေးဆောင်ဖွဲ့စည်းပုံမှာ plasticity အတွက်အာရုံခံ accumbens ။ နတ် neuroscience ။ 2012; 15: 891-896 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
88 ။ Toda အက်စ်, Shen အိပ်ချ်, Kalivas PW ။ actin polymerization ၏တားစီးသည့်နျူကလိယ accumbens အတွက်ကျောရိုး shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်ထဲမှာကိုကင်း-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများကိုကာကွယ်ပေးသည်။ Neurotox Res ။ 2010; 18: 410-415 ။ [PubMed]
89 ။ Norrholm SD က။ , Bibb ဂျေအေ။ , Nestler EJ ။ , Ouimet CC ကို။ , တေလာ JR ။ , နျူကလိယ accumbens အတွက် dendritic ကျောရိုး၏ Greengard P. ကင်း-သွေးဆောင်ပြန့်ပွား cyclin-မှီခို kinase-5 ၏လှုပ်ရှားမှုအပေါ်မှီခိုသည်။ neuroscience ။ 2003; 116: 19-22 ။ [PubMed]
90 ။ LaPlant ဆိုးကျိုး, Vialou V. , Covington HE ။ , et al Dnmt3a နျူကလီးယပ် accumbens အတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ကျောရိုး plasticity ထိန်းညှိ။ နတ် neuroscience ။ 2010; 13: 1137-1143 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
91 ။ Bibb ဂျေအေ။ , Chen ကဂျေ, တေလာ JR ။ , ကိုကင်းမှနာတာရှည်ထိတွေ့မှု၏ et al အကျိုးသက်ရောက်မှုဟာအာရုံခံပရိုတိန်း Cdk5 နေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်နေကြသည်။ သဘာဝ။ 2001; 410: 376-380 ။ [PubMed]
92 ။ Sklair-Tavron L. , ရှီ WX ။ , ယာဉ်ကြော SB ။ , Harris က HW ။ , Bunney BS ။ , Nestler EJ ။ နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက် mesolimbic dopamine အာရုံခံ၏ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်ထဲမှာမြင်နိုင်အပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်သည်။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2007; 93: 11202-11207 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
93 ။ Russo SJ ။ , Bolanos CA. , Theobald DE ။ , et midbrain dopaminergic အာရုံခံအတွက်အယ်လ်အဆိုပါ IRS2-Akt လမ်းကြောင်း opiates မှအမူအကျင့်များနှင့်ဆယ်လူလာတုံ့ပြန်မှုထိန်းညှိ။ နတ် neuroscience ။ 2007; 10: 93-99 ။ [PubMed]
94 ။ Spiga အက်စ်, Lintas အေ, Migliore အမ်, ဒိုင်ယာနာအမ် ALTER ဗိသုကာနှင့်ဆေးခြောက်မှီခိုအတွက် mesolimbic dopamine စနစ်၏အလုပ်လုပ်တဲ့အကျိုးဆက်များ။ စှဲလမျးသူ Biol ။ 2010; 15: 266-276 ။ [PubMed]
95 ။ ဂရေဟမ် DL ။ , Edwards ကအက်စ်, Bachtell RK ။ , DiLeone RJ ။ , Rios အမ်, ကိုယ်ပိုင် DW ။ ကိုကင်းသုံးစွဲခြင်းနှင့်အတူနျူကလိယ accumbens အတွက် dynamic BDNF လှုပ်ရှားမှု selfadministration နှင့် relapse တိုးပွားစေပါသည်။ နတ် neuroscience ။ 2007; 10: 1029-1037 ။ [PubMed]
96 ။ အဆိုပါ mesolimbic dopamine စနစ်ဂရေဟမ် DL, Krishnan V. , Larson eb, et al TrkB: ။ ။ ကိုကင်းဆုလာဘ်အပေါ်ဒေသ-တိကျတဲ့ဆိုးကျိုးများ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2009; 65: 696-701 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]